မဟောင်းတဲ့အချစ် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – နတ်ဆိုးကြီး
ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျော်ဆုံး အချိန်လေးပါပဲ……။ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်ရတဲ့ သမီးလေးရယ်… ကျွန်တော် ရင်ခုန်ရဆုံး လူရယ်… အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေး တစ်ခုလို နေရတာ အရမ်းဝမ်းသာမိတာ အမှန်ပါ….။
ကျွန်တော် လေးနက်စွာ မတွေးပဲ.. ချရေးလိုက်သော ကာရံမရှိသော စာလေး …။ စာလေးရဲ့ အောက်မှာ ၅ နှစ် သာသာ သမီးလေး ပုံတူ……။ ၎င်း…. ၎င်းတို့နှင့် အတူ ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ဘဝတိုတိုရယ်… မဆုံးသော အကြောင်းအရာများဆီသို့… မှတ်တမ်းတင်ထားသော စာအုပ်လေး……။
လူပျိုပေါက်စ ဂျိုထောင်စ ဆိုသလို… အောင်ခန့် တစ်ယောက် တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်လောက်ရောက်လာတော့… အပေါင်းအသင်းကောင်းမှု နှင့် အင်တာနက် ပွန်းကားများ ကောင်းမှုကြောင့် အတော် ကဲမယ် ဆွဲမယ် ဖြစ်နေချိန်…..။
အောင်ခန့် က အမည်နဲ့ လိုက်အောင် ရုပ်ရည် သန့်ပြန့်သည်။ Gem ဆော့ထားသော ကျေးဇူးကြောင့် Body က ပျိုတိုင်းငေးရလောက်သော ကိုယ်ခန္ဒာမျိုး…။ ပထမနှစ်ကတည်းက King ဖြစ်ခဲ့သော အောင်ခန့် အဖို့ သိပ်ထွေထွေထူးထူး ကောင်မလေး တွေကို လိုက်စရာမလို …။ အလိုလို ကြွေဆင်းပြီးသား…..။
အခုလဲ အောင်ခန့် ကျောင်းမှာ အလှဆုံး Queen ဆိုသူ ရူပဗေဒမေဂျာမှ ပန်းမြတ်သဇင် နှင့် တက္ကသိုလ် အခန်းလွတ် တစ်ခန်းထဲမှာ iPhone S7 Plus နှင့်….
“လူတွေ မြင်ကုန်မယ် အစ်ကို …”
“ပန်းမြတ်ကလည်းကွာ ကိုယ့်ချစ်သူ အလှတရားတွေ မှတ်တမ်းတင်ထားရုံလေးကို…”
“အဲဒါဆိုလဲ မြန်မြန်လုပ်ကွာ ရှက်တယ်… ပြီးတော့ ….”
“စကားမပြောနဲ့ကွာ ဒီမှာ record နှိပ်ထားတာ “
ပန်းမြတ် ခြေထောက်က မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကိုယ်တပိုင်း စားရေးစားပွဲပေါ်မှောက်ပြီး ကုန်းနေရတာ အဆင်ပြေသော်လည်း ဂျင်းဘောင်းဘီက ဒူးလောက် ရောက်နေသည့်အပြင် ဖုန်းကင်မရာနှင့် အရိုက်ခံရသည့် အတွက် ရှက်သလိုလိုတော့ရှိသည်။
အောင်ခန့် ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက် သူအာရုံရှိတာက ပန်းမြတ် ပန်တီအပြာကျားလေးနှင့် လုံးနေသော တင်ပါးလေး…။ ပန်တီက သေးတော့ ပန်းမြတ် တင်ပါးကြီးကြီးတို့က မနိုင်မနင်း အပြင်သို့ လုံးထွက်နေလေသည်…။ အောင်ခန့် ထိုမြင်ကွင်းများကို ရိုက်ရင်းတန်းလန်း… လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဖင်လုံးလုံးကို ပွတ်သပ်နေလေသည်…။ ပွတ်သပ်ရင်း ပန်တီကျားလေးကို အောက်သို့ ဖြည်းဖြည်းလေး ဆွဲချွတ်လိုက်သည်..။ ဖုန်းကင်မရာကို အောက်သို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ချိန်လိုက်သည်…။ ဖြူဖွေးသော ဖင်မြောင်း၏ အောက်နားတွင်…. စိပြီးပူးကပ်နေသော ပန်းမြတ်၏ ဖုတ်ဖုတ်လေးက အောင်ခန့် ရင်းနှီးပြီးဆိုသော်လည်း… ဘယ်နှခါကြည့်ကြည့်.. ကာမရာဂကို ထိန်းချုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ..။ ထိုအချင်းအရာထက် ဆိုးတာက… အနံ…။
ပန်းမြတ်က ရုပ်ကလေးလှသော်လည်း အနေအထိုင်ကြမ်းသည်…။ ပြစ်စလက်ခတ် နေတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား… ဖြစ်သလို နေတယ်လိုပဲ ပြောရမလား… ကိုယ်နံပြင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား … အောင်ခန့် နှာခေါင်းထဲသို့ ဖုတ်ဖုတ်နံ့ နှင့် သေးနံ ခပ်ပြပြလေး ဝင်လာလေသည်…။ ထိုအချင်းအရာကလည်း တောက်ခါနီးမီးခဲကို လေနှင့် မှုတ်လိုက်သလို… ရဲခနဲ ထောင်းခနဲ ဖြစ်စေသည်…။
“မြန်မြန်ကွာ… လူတွေ တွေ့ကုန်မယ်…”
ပန်းမြတ်အပြောက နောက်ကျနေသေးသည်…။ အောင်ခန့် တစ်ယောက် ဂျင်းဘောင်းဘီထဲမှ အတင်းရုန်းထွက်နေသော လီးကို ထုတ်နေလေပြီ…။ ထိုနောက်….
“အား….. နာတယ်အကို…. အတင်းထိုးထည့်တော့တာပဲ…”
“ဆောတီး.. ပန်းမြတ် .. ကို နဲနဲလောသွားတယ်… အချစ်က အရမ်းလှတာကိုး… ဟီး..”
ရုတ်တရက် ဖုတ်ဖုတ်ထဲ ဝင်သွားသော လီးဒဏ်ကြောင့် ပန်းမြတ် ပြောခြင်းသာ…။ ဒီလိုအတွေ့အကြုံက ပန်းမြတ်အဖို့တော့ ရိုးနေပြီ..။ လီး ဝင်သွားသော်လည်း အောင်ခန့်က ရပ်နေသဖြင့်….
“လုပ်မှာဖြင့် လုပ်ကွာ… ဘာလို့ ရပ်နေတာလဲ..”
“ချစ်နာတယ်ဆိုလို့လေ… ဒါဆို လုပ်တော့မယ်နော်….”
အောင်ခန့်လီးကို ဖုတ်ဖုတ်ထဲမှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထုတ်လိုက်လေသည်…။ ဖုတ်ဖုတ်၏ ဘေးသားတို့က လီးတွင် ကပ်ပါလာပြီး ဖုတ်ဖုတ် အပြင်သား နဲနဲစူထွက်လာလေသည်….။ ဖုတ်ဖုတ်ထဲမှ အချစ်အရည်ချွဲချွဲတို့ လီးတွင်ကပ်လာပြီး အပြင်နဲနဲ ထုတ်လိုက်သည့် လီးတဝက်ခန့်က ပြောင်လက်နေသည်..။ ပန်းမြတ် ဖုတ်ဖုတ်က စုပ်မျော့ ပါသည်ထင်၏…။ အတွင်းသားတို့က အတင်း ဆွဲစုပ်ထားသလို အောင်ခန့် ခံစားရလေသည်…။ အရသာခံပြီး တဝက်လောက် ဆွဲထုတ်အပြီး.. လီးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း တရစ်ချင်း ပြန်သွင်းလိုက်သည်…။ ဖုတ်ဖုတ် အတွင်းသား၏ နူးညံ့ခြင်း နှင့် စုပ်ယူအားတို့က အောင်မြတ်အတွက် ဘာနဲမှ မလဲနိုင်သော.. ပန်းမြတ်၏ သဘာဝက ပေးသော လက်ဆောင်မွန်ပမာ….။
“အီးးးးး…… အားး…. ပန်းမြတ်ကို သနားပါ ကိုရယ်… ပန်းမြတ်ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့နော်… မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါ ကိုရယ်…”
ပန်းမြတ် အရမ်းကောင်းနေမှန်း အောင်ခန့် ကောင်းကောင်းသိသည်….။ ဒီစကားပြောတော့မယ်ဆိုတာလဲ မှန်းထားပြီးသား…။ သို့သော် ခပ်သွက်သွက် မလုပ်သေး……။ အချက် ၂၀ ခန့် ဖြည်းဖြည်းလေး စိမ်ပြီးလိုးနေသည်…။ ဖုတ်ဖုတ်ထဲမှ အရည်ကြည်များသာမက… အဖြူခပ်စေးစေးတွေပါ.. ပါလာလေပြီ….။ ဖုတ်ဖုတ်အတွင်း ညှစ်အားကလည်း စောစောကထက် ပြင်းလာလေပြီ….။ ထိုအခါမှ… အောင်ခန့် စပြီး ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်တော့သည်….။ အောင်ခန့် ဆောင့်ပုံက ပညာသားပါသည်…။ စကောဝိုင်းလို ကစားပြီး ဆောင့်နေတော့ ပန်းမြတ် ဖုတ်ဖုတ် နံရံ တစ်ခုလုံး နေရာအနှံ့ ထိုးမိနေသည်။။
“အာ… အားး…. အီး… အီး… အား…. ဆောင့်ပါ ကိုရယ်…. ဆောင့်ပါ…. အား…. အရမ်းကောင်းတယ်…”
ပန်းမြတ် ပြီးတော့မည်ကို အောင်ခန့် သိသည်။ထို့ကြောင့်….
”ပက်လက်လှန်ကွာ… ဒီလိုကြီးက အားမရဘူး… နောက်ပြီး… ပန်းမြတ်လဲ ကိုနောက်က ဆောင့်တော့ ပေါင်နာမှာပေါ့”
“ဟာကွာ…. အမြဲ အဲလိုပဲ… အင်းပါ…”
အားမလို အားမရ လေသံလေးနှင့် ညည်းပြီး စာရေးစာပွဲပေါ် ပက်လက်လေး လှန်ပေးလိုက်လေသည်။ အောင်ခန့်က ကျနေသော ခြေထောက် ၂ ချောင်းကို မြှောက်လိုက်ရင်း…. ပြူထွက်နေသော ဖုတ်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းထဲကို အဖြူရည် ပျစ်ပျစ်တို့ ပေနေသော လီးဖြင့် ထိုးထည့်လိုက်လေသည်..။
“အား.. ကိုရယ် ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးနော်…”
“အင်း ဆောင့်ပေးမယ်နော် ချစ်…”
အောင်ခန့် ဆောင့်လဲ ဆောင့်.. အပေါ်အင်္ကျီလည်း လှန်ရင်း… ပန်းမြတ် နို့နှစ်လုံးကို အငမ်းမရ စုပ်ယူလိုက်သည်…။ ပန်းမြတ်တစ်ယောက် ဖုတ်ဖုတ်ထဲ လျင်မြန်စွာ ဝင်နေသော လီး၏ အရသာနှင့် နို့စို့ခံရသော အရသာတို့က ဘာနဲမှ မတူအောင်.. ကောင်းလွန်းနေတဲ့ အတွက်.. တီကောင်ကို ဆားနဲ့ တို့ သလို လူးလွင့်နေလေသည်…။ အောင်ခန့်၏ ဆောင့်ချက်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ပြင်းလာလေပြီ….။
အပြင်မှ အသံကြားမည်စိုးသဖြင့် ပန်းမြတ် ကိုယ့်ပါးစပ်ကို လက်နှင့် အုပ်လိုက်လေသည်။
“အာ…အာ.. အထဲမှာ…အာ.. မပြီးနဲ့…အားးး..”
ပန်းမြတ်ပြောစကား နောက်ကျခဲ့လေပြီ…။ သုတ်ရည် နွေးနွေးတို့က ပန်းမြတ် ဖုတ်ဖုတ်ထဲသို့ အရှိန်နှင့် တိုးဝင်သွားခဲ့လေပြီ..။ အောင်ခန့် လီးကို ချွတ်လိုက်သည်နှင့် ဖုတ်ဖုတ်ထဲမှ သုတ်ရည်တို့ ပြန်အန်ထွက်ကုန်လေသည်။
“ညစ်ပတ်ပြီ ကိုရယ်…. ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်ရင် အရည်တွေ ကွက်ကုန်တော့မှာပဲ… နောက်ပြီး… တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဒုက္ခ … ဘာမှန်းမသိဘူး…”
ပန်းမြတ်.. ပြောရင်းဆိုရင်း… ဘောင်းဘီ ပြန်ဝတ်နေသည်။ အောင်ခန့်ကတော့.. သူ့လီးတွင် ပေနေသော စောက်ရည် ဖြူဖြူတို့ကို တစ်ရူး နှင့် သုတ်ပြီး ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်နေသည်…။ ပန်းမြတ် ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး ပွယောင်းယောင်းရှိသော ဆံပင်တို့ကို လက်နှင့် သပ်ပြီး…
“ကို .. သွားတော့မယ်နော်… နောက်မှ တွေ့မယ်… နောက်တချိန်က စတော့မှာ…”
ခေါင်းလေး တစ်ချက် ဆက်ပြရင်း ဆေးလိပ်ဖွာကာ… ပန်းမြတ် နောက်ကျောကို ကြည့်နေမိတော့သည်။
“ဘဝတကွေ့… ခဏအတွေ့မှာ သာယာလို့ထင်… ထိုအရာကို .. အချစ်ဟု ခေါ်မလား”
ဆောင်းရာသီဟု ဆိုသော်လည်း နေလည်ခင်း အလင်းရောင်က စူးရှလှ၏..။ အအေး ၂ လုံး .. လူ ၂ ဦး ထိုင်ခုံ ၂ လုံး စားပွဲတစ်လုံး နှင့် တစ်လံသာသာရှိသော နေရာအဝန်းအဝိုင်းလေးတစ်ခု ငြိမ်သက်လို့နေလေသည်။ ငြိမ်သက်မှုကို ထိုးဖောက် ပေါက်ခွဲ လိုက်သည်က ပန်းမြတ်သဇင်…။
“ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ အစ်ကို… ပန်းမြတ်တော့ စိတ်ညစ်တာပဲ”
သောက်လက်စ ဆေးလိပ် မီးခိုးများ အကြားမှ ခပ်ပြင်းပြင်း လေပူတစ်ချက် မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်..။
“ခက်တယ်.. ပန်းမြတ်ရယ်… ကိုတို့က ကျောင်းမှ မပြီးသေးတာ..”
“ကို … အဲ့စကားတော့ မပြောနဲ့ နှစ်ယောက်လုံး မှားခဲ့လို့လေ… ပန်းမြတ် တစ်ယောက်တည်းကြောင့် မဟုတ်ဘူး..”
ထိုစကားသံ ဒေါသကြောင့် နဲနဲ ကျယ်သွားသည်ထင်….။ မလှမ်းမကမ်း စားပွဲမှ ထိုင်နေသော ကောင်မလေး ၂ ယောက် လှည့်ကြည့်သည်။
“ကဲပါ ပန်းမြတ်ရယ် … အာလုံး ကို့တာဝန်ထား…”
“ဒါဆိုလဲ …ပြီးရော … မေမေက သူနဲ့ လာတွေ့ပါတဲ့”
စောစောက ကောင်မလေး ၂ ယောက် ထပ်လှည့်ကြည့်ပြန်သည်။ အောင်ခန့် အသံလျှော့ရင်း
“နေပါဦး ..ပန်းမြတ် ဗိုက်ကြီးတဲ့ ကိစ္စ ပန်းမြတ် အမေ သိသွားပြီ… ဟုတ်လား…”
“ဟိုဝှာ မဖြစ်လို့ ဆီးစစ်ကြည့်တုန်းကလေ….. ဟို…အဲ့ စစ်တဲ့ဟာ.. သန့်စင်ခန်းထဲမှာ မေ့ခဲ့…”
အောင်ခန့် မိုးကြိုးအတောင့်လိုက် ပစ်ချခံရသလို ဖြစ်သွားသည်။ အောင်ခန့် စဉ်းစားထားတာက ပန်းမြတ်ကို ချော့မော့ပြီး ဗိုက်ကိစ္စ ဖြေရှင်းရန် အကြံ…။ အခုတော့ … ပြသနာက ထင်ထားသည်ထက် ပိုပြီး ကြီးနေလေပြီ…။ သို့သော် အောင်ခန့် အဖေ မဆုံးခင်က အောင်ခန့်ကို ဆုံးမခဲ့သော စကားရှိသည်…။
“သား…. ယောင်္ကျားကောင်းဆိုတာ လုပ်ရဲရင် ခံရဲရတယ်ကွ.. တာဝန်ယူရဲရတယ်… ဘယ်ကိစ္စမဆို မလုပ်ခင် အကြာကြီး စဉ်းစားလို့ရတယ်… အေး လုပ်ပြီးရင်တော့ ဆုံးအောင်လုပ်.. အကျိုးအပြစ်.. အကုန် ခံပေတော့…။ အဲဒါမှ ယောကျ်ားလို့ ခေါ်တယ်ကွ…။ ငါ့သား ယောင်္ကျားစစ်စစ် ဖြစ်ပါစေကွာ”
ထို့ကြောင့်ပင် အောင်ခန့် ပန်းမြတ်အမေနှင့် တွေ့ရန် လက်ခံခဲ့သည်….။ သို့သော် လူငယ်ဘဝကို ဆုံးရှူံးရတော့မည်ဆိုသော အတွေးကလည်း ရှိပြန်သည်…။ စိတ်ညစ်နေသည်က အမှန်….။
အခုလို လည်ကတုံးကြီးဝတ်ပြီး ယောပုဆိုးကြီးကလည်း အနေရအထိုင်ရ ကြပ်လှသည်..။ အဆင့်မြင့် စားသောက်ဆိုင်တွင် အဲကွန်းများ ဖွင့်ထားသော်လည်း အောင်ခန့် ချွေးဇောများ ပြန်ပြီး တစ်ရှူး ခဏခဏ ထုတ်သုတ်နေရသည်..။ ပန်းမြတ်နှင့် သူ့အမေကလည်း ရောက်လာတော့မည်…..။
“ဟိတ်…. ကို တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေပြီလား..”
“ဟင် ….ပန်းမြတ်…. ပန်းမြတ်မေမေရော…..”
“အခုမှ ကြောက်ပြနေလိုက်တာ…. မေမေက ဝင်စရာတစ်ခုရှိလို့ ပန်းမြတ်ကို အရင်လွတ်လိုက်တာကိုရဲ့”
“မကြောက်ပါနဲ့ ကိုရယ် မေမေက အေးဆေးပါ… နောက်ပြီး ဆိုရှယ်ကျတယ်.. ခေတ်ဆန်တယ်.. အေးဆေး”
ပန်းမြတ်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောနေသော်လည်း…အောင်ခန့် နေသာသည်မရှိ… ရေတစ်ခွက်မော့ချလိုက်သည်. . ရင်အေးလို အေးငြားပေါ့…။
“ဟော.. မေမေတောင် လာနေပြီ.. မေမေ.. သမီးတို့ ဒီမှာ….”
အောင်ခန့် သောက်နေသော ရေခွက် အသာချပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ လေဒီရှူးအနီရောင်… အသားကပ် စတော်ကင်နှင့်…. စကပ်က ဒူးဖုံးရုံသာသာ…. လည်ပင်းအဟိုက် အင်္ကျီကို အပေါ်မှ ကုတ်ထပ်ထားပြီး စလင်းဘတ်ကို လက်မှာ ချိတ်ပြီ… တောင့်တောင့်တင်းတင်း….. ၃၀ နှစ်လောက်သာ ထင်ရသည်..။
“အန်တီ့ နာမည်က မာလာသဇင် ပါ.. တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် သား..”
ဟု ဆိုကာ.. လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန် လက်ကမ်းပေးလေသည်…။ အောင်ခန့် ထိုအခါမှ သတိပြန်ဝင်လာလေသည် ..။ ဘယ်အချိန်က မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဘယ်အချိန် လက်လှမ်းမိမှန်းမသိ….။ လက်နွေးနွေး နူနူးညံ့ညံ့ လက်၏ အထိအတွေ့….။
“သားက လူချောပဲ… အဲ့ဒါကြောင့် သမီးလေး ကြိုက်တာကိုး..”
“ဟုတ် အန်တီ ကျေးဇူးပါ…”
“ဒါနဲ့ မေးပါဦးမယ်… အန်တီ့ သမီးကို တကယ် မေတ္တာ ရှိပါတယ်နော်…”
“အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မေတ္တာရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူးကွ…. မင်း အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်မှ ရမယ်”
“ဟုတ်…ဒါပေမဲ့ ကျနော်က ကျောင်းမပြီးသေးတော့.. အလုပ်က ….”
“အဲ့ အတွက် မပူပါနဲ့ အန်တီဖွင့်ထားတဲ့ BAR တစ်ခုရှိတယ်… အဲ့မှာလုပ်ပေါ့….”
”အဲဒါ ကောင်းတယ် ကို…. ပန်းမြတ်လည်း သဘောတူတယ်…”
“ဟုတ် အန်တီ.. ကျနော် လုပ်ပါ့မယ်…”
“အေးကွယ်…. အန်တီသမီးလေး ဆိုးသမျှ မင်း သည်းခံရမယ်နော်….။ သူအဖေက သူ ၃ နှစ် သမီးလောက်ကတည်းက ဆုံးသွားတာဆိုတော့…. ဖခင်မေတ္တာ ငတ်ရှာတယ်ကွယ်…”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီ…. ကျနော် သည်းခံနိုင်ပါတယ်”
“အေး.. မှာစရာရှိတာ မှာပြီး… စားစရာရှိတာ စားတာပေါ့…။ နောက်မှ မင်း မိဘတွေနဲ့ တွေ့ပြီး မင်္ဂလာကိစ္စ စကားပြောတာပေါ့..”
အောင်ခန့် တစ်ယောက် အစားပဲ အာရုံထားပြီး စားနေသည်…။ ထမင်းစားပြီးတော့ အချိုရည်သောက်မည် အပြု… ဆုံဆည်းတိုက်ဆိုင်သော လက်တစုံ…. ပန်းမြတ်လက်မဟုတ် သူ့မေမေလက်…..
“ရပါတယ် အန်တီ.. ကျနော်က မမှာပဲ အန်တီ့ အအေးကို မှားသောက်မိတော့မလို့ပါ… ကျနော် မှာလိုက်ပါမယ်… အန်တီသောက်ပါ..”
ပန်းမြတ်အမေက ပြုံးပြရင်း… အအေးခွက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်လေသည်…။ အနီရောင် ဆိုးထားသော နှုတ်ခမ်းနီတို့က ခွက်လေးတွင် စွန်းကျန်ရစ်နေသည်…။ လှပသော နှုတ်ခမ်းအစုံက အချိုရည် နီနီတို့ကို သေသပ်လှပစွာထိပြီး လည်ချောင်းတလျှောက် ဆင်းသွားသည်ကို မြင်နေရသည့်အလား….။ အောင်ခန့် တသက် မြင်ဖူးသမျှ အလှပဆုံးသော နှုတ်ခမ်းတစုံ…. ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းကို လျှာဖျားလေးနှင့် သပ်လိုက်ပုံက… အောင်ခန့် အကြည့် လွဲလိုက်သည်….။
“ကဲ ..အန်တီ ကိစ္စလေးရှိလို့ သွာလိုက်ဦးမယ်… ဘေတခါတည်း ရှင်းသွားမယ်နော်…”
ဟု ပြောကာ ဆိုကာနှင့် ထလိုက်ချိန်…. ဟိုက်နေသော လည်ပင်းပေါက်မှ ဝင်းခနဲနေအောင် ထွက်လာသော ရင်မွှာတစ်စုံ.. ပြီးတော့… လှည့်ထွက်သွားပြီး လူတိုင်းငေးရလောက်သည့် တင်တစ်စုံ…. အောင်ခန့် တစ်ယောက်.. ဒေါ်မာလာသဇင်ကို ပြုံးပြမိလား.. သို့မဟုတ်… ပါးစပ် အဟောင်းသားနှင့် ငေးနေမိသလား အောင်ခန့်ကိုယ်တိုင်ပင် မသိတော့ပြီ…..။
ဘာလိုလိုနဲ့ အောင်ခန့်နှင့် ပန်းမြတ်သဇင်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခဲ့သည်မှာ (၇) လ ထဲသို့ပင် ရောက်ခဲ့လေသည်။ ဒါလဲ လွယ်လွယ်လေးတော့မဟုတ်ခဲ့…။ အောင်ခန့်အမေက လုံးဝသဘောမတူ..။ ပန်းမြတ် နောက်ကြောင်း မကောင်းဘူးဟု သိထားလို့ ဖြစ်သည်…။ နောက်တစ်ချက်က သားဖြစ်သူ ပညာမစုံသေးတာလည်း ပါသည်…။ ပန်းမြတ်တို့၏ မျိုးရိုးကြောင့်လည်း ပါသည်ထင်သည်…။ ဒေါ်မာလာသဇင်ကြောင့်လည်း ပါသည်…။
ဒေါ်မာလာသဇင်က သေသွားသော ယောကျာ်း၏ နောက်မိန်းမ ….။ ၁၆ နှစ်သမီး ဘဝတွင် ချစ်သူနှင့် ချစ်ရည်လူးပြီး မဖုံးနိုင်သည့်အဆုံး မြို့က သူဌေးကြီး တစ်ယောက်ကို ကောက်ယူလိုက်သည်…။ သူဌေးကြီးကလည်း ကိုယ်ဝန်မှာ သူ၏ ကိုယ်ဝန်ဟု ထင်ပြီး မယားကြီးကို ကွာရှင်းပြီး ဒေါ်မာလာကို ယူခဲ့သည်။ သူဌေးကြီးက နှလုံးရောဂါအခံ ရှိသောကြောင့် မယားကြီးက လိင်မှုကိစ္စတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ မရှိအောင် ဘာသာရေးနှင့် ဆွဲဆောင်ထားသော်လည်း ၎င်းကို မသိသော ဒေါ်မာလာ သည်.. ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း အစွမ်းကုန် ပြုစုလေသည်..။
အတန်ငယ် သက်သာလာသော နှလုံးရောဂါသည်.. ဒေါ်မာလာ လက်ထက်တွင် မကြာခဏဆိုသလို ဖောက်တတ်လေသည်..။ အမှန်အတိုင်းဆိုလျှင် သူဌေးကြီးသည် ဒေါ်မာလာနှင့် လိုးရင်းပင် အသက်ပါသွားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သူဌေးကြီး ဆုံးတော့ ဒေါ်မာလာ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်လောက်…။ ပန်းမြတ်သဇင်က ၃ နှစ်သမီးလောက်…။ ဒေါ်မာလာ နောက်အိမ်ထောင်မပြုတော့ … သမီးလေးအရွယ်ရောက်ရင် သူမလို မမှားစေချင်…။
အောင်ခန့်ကတော့ ပန်းမြတ်တို့အိမ် လိုက်နေရသည်..။ အောင်ခန့် အိမ်သာသွားပြီး အိပ်ယာသို့ ပြန်လာလေသည်..။ ပန်းမြတ် ဗိုက်ဖောင်းဖောင်းနှင့် မအိပ်သေးတာကြောင့်
“ပန်းမြတ် ..အိပ်တော့လေ…. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုတာ စောစော အိပ်ရတယ်…”
“မအိပ်ချင်ဘူး ကိုရယ်…. ကို့ရဲ့ အထိအတွေ့ကို လိုချင်လို့….”
“ဟာ..ပန်းမြတ်ကလဲ ဗိုက်ကြီးနဲ့ မဖြစ်ဘူးလေ…”
“ ဘာလဲ ကိုက အဲ့စိတ်မရှိရအောင် တခြားကောင်မနဲ့ နေနေတာလား…”
“မဟုတ်ရပါဘူး ချစ်ရယ်…. ချစ်တွက် မကောင်းမှာ စိုးလို့ပါ..”
“ဒါဆို အလုပ်နဲ့ သက်သေပြ…”
ပန်းမြတ် ကာမ ကိစ္စကို အလွန်ကြိုက်မှန်း အောင်ခန့်ယူပြီးမှ သိလေသည်…။ အခုလည်း ဗိုက်ကြီးနှင့် ဆန္ဒရှိနေပြန်သည်…။ ပန်းမြတ် လက်က အောင်ခန့် ညအိပ်ဘောင်းဘီသို့ ပွတ်သပ်နေပြီ…။
“စိတ်မပါဘူးလဲ ပြောသေးတယ်… ကို့ဟာကြီးက ဘောင်းဘီတောင် ပေါက်ထွက်တော့မယ်….”
“ဒါကတော့ ချစ်က ပြုစု တော်တာကိုး…..”
ပန်းမြတ် ပြောနေရင်းနှင့်ပင် လက်က ဘောင်းဘီကို ဆွဲချလိုက်သည်…။ အောင်ခန့်အလိုက်သင့် ဖင်ကြွပေးလိုက်သည်…။ ပန်းရောင်ဝင်းပြီး တင်းနေသော လီးထိပ်ဖူးကို ပန်းမြတ် ရေခဲချောင်းငတ်နေသော ကလေး တစ်ယောက်လို တပြွတ်ပြွတ် မြည်အောင် စုတ်လေသည်….။
အောင်ခန့် မျက်လုံး မှိတ်လိုက်ချိန်တွင် အာရုံမှာပေါ်လာတာက …. ပန်းမြတ်အမေ…. ပြုံးပြရင်း…အအေးခွက်ကို လှမ်းကိုင်…အနီရောင် ဆိုးထားသော …လှပသော နှုတ်ခမ်းအစုံက အချိုရည် နီနီတို့ ကို သေသပ်လှပစွာ ထိပြီး လည်ချောင်းတလျှောက် ….. အလှပဆုံးသော နှုတ်ခမ်းတစုံ….ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းကို လျှာဖျားလေးနှင့် သပ်လိုက်ပုံက…
အောင်ခန့် ဆက်မစဉ်းစားချင်တော့…ထပ်လဲ မပြစ်မှားချင်တောာ.. ထို့ကြောင့်…
“ချစ် ..ကို မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ… လုပ်ရအောင်… လေးဘက်ကုန်းပေး…..”
ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် ပန်းမြတ် ဗိုက်ကလေးကို ပင့်ကာ… လေးဘက်ထောက်လိုက်လေသည်…။ အောင်ခန့်လည်း ပန်းမြတ် သရေတွေ ပေနေသော လီးထိပ်ဖူးကို ပန်းမြတ် ဖုတ်ဖုတ် ပြဲပြဲလေး၏ အဝတွင် တေ့လိုက်သည်။ ဗိုက်က ၇ လ ကျော်ပြီမို့လားမသိ… ဖုတ်ဖုတ်မှာ နဲနဲ ပွင့်အာနေသည်..။ ထို့အပြင် အရေလေး အနည်းငယ် ထွက်နေသည်။
“ချစ်…ချစ်ထဲက အရည်တွေ ထွက်နေပါလား…”
“ထွက်ပစေ ကိုရာ…လုပ်မှာသာ လုပ်ပါ…. ဖြည်းဖြည်းတော့ လုပ်နော် ကို….”
အောင်ခန့် နှင်းဆီပွင့် ပွင့်နေသလို အနည်းငယ် အာနေသော ဖုတ်ဖုတ်ထဲသို့ လီးကို တရစ်ချင်းသွင်းလိုက်သည်..။
ထို အချိန်…ဒေါ်မာလာ တစ်ယောက် ..မီးဖိုခန်းတွင် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ အိမ်ဖော်များရှိသော်လည်း စိတ်တိုင်းမကျသောကြောင့် ကိုယ်တိုင် စွပ်ပြုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ စွတ်ပြုတ်လုပ်ရန် ညနေကမှ ဈေးသွားပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရသော ကြက်သားကိုအသား နုပ်နုပ်စင်း အရိုးဖယ်ထားပြီး သပ်သပ်ထား.. စောစောက ကြက်အသားချည်း နုပ်နုပ်ဆစင်းထားသည်ကို ဆား နနွင်း အချိုမှုန့် ကြက်သားမှုန့် နဲနျဲနှင့် နှယ်….ထိုသို့ ပြုလုပ်နေစဉ်..မီးပေါ်တွင် နွားနို့ တည်ထားသည်။
ကြက်အရိုးများကို ဓါးနှင့် အရိုးကွဲရုံ ခုတ် ဆား နနွင်း အချိုမှုန့် ငံပြာရည်နဲနဲ သံပုရာသီး အရည် နဲနဲညှစ်…ကြက်သွန်ဖြူ ၃၊ ၄ တက်နှင့် ဂျင်းထောင်းထည့်.. ပြီးတော့ နွားနို့အိုး ပွတ်သည် အထိ ခဏ နှပ်ထားလိုက်သည်။ နွားနို့ အပွတ်ကောင်းပြီး အနေတော် ဖြစ်မှ မီးပေါ်က ခဏချ စောစောက ကြက်ရိုး အိုးကို မီးပေါ်တင်ပြီး ရေ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နုပ်နုပ်စင်းထားသော ကြက်သား နည်းနည်း ထည့်လိုက်သည်။
ကြက်သားအိုး ပွတ်သည်နှင့် ဆီအိုးတင် စောစောက ကြက်သားချည်း နုပ်နုပ်စင်း ထားသည်ကို အနေတော်လုံး အနည်းငယ် နီလာသည် အထိ ကြော်ကာ ဆီစစ်ထားသည်။ ဆီ စစ်ထားစဉ် နွားနို့အိုးပြန်တင်ကာ နွေးထားသည်။ ပြီးမှ ဆလပ်ရွက်နှင့် ခရမ်းချဉ်သီး နံနံပင် တို့ ကို လှသလို ပြင်ဆင်ကာ ကြက်သားလုံးကြော်ထည့်.. နွားနို့ထည့်… ကြက်စွပ်ပြုတ်ကို အရည်ချည်း အသာ စစ်ထည့်ပြီး သမီး ရှိရာ အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းသို့ တက်ခဲ့သည်။
အိပ်ခန်း တံခါးခေါက်ရန် အလုပ်… တံခါးမှာ အနည်းငယ် ဟနေတာကြောင့် ဖွင့်မည် အပြု…..
သမီးဖြစ်သူ ပန်းမြတ်က လေးဘက်ထောက်လျှက် သားမက်ဖြစ်သူ အောင်ခန့်က အနောက်မှနေပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆောင့်နေသည်။ လီးကြီးမှာ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် အကြော အပြိုင်းပြိုင်းဖြင့်…. ဒေါ်မာလာ အနှစ် ၂၀ ကျော်လောက် ပျောက်ဆုံးနေသော ကာမရာဂတို့ ကို လှုပ်နိုးသလို …. ထိုအချင်းအရာကို မပြုမူ မမြင်တော့.. မခံစားရတော့သည်မှာလည်း အနှစ် ၂၀ ကျော်….။ ဒေါ်မာလာ အာခေါင်တွေခြောက်လာသည် သွေးသားထစ အပျိုရိုင်းလေးတစ်ယောက်လို ရင်ခုန်မှုမြန်လာခဲ့ပြန်သည်။
သားမက်နှင့် ယောက္ခမ မသင့်တော်ဘူးဆိုသော အတွေး… ငါ့သမီး အလိုးခံနေရပါလားဆိုသော အတွေး… အတွေးများစွာ နှင့် ခေါင်းထဲတွင် ပြည့်နေသော်လည်း မျက်လုံးက သားမက်၏ လီး အဝင်အထွက်အား မလွတ်တမ်း မျက်တောင်မခပ် ကြည့်မီနေသည် မဟုတ်ပါလား။ ။
ဒေါ်မာလာ အခန်းဝမှ အသာလေး ထွက်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် သူမ၏ သားမက် အောင်ခန့်၏ လီးထိပ်နီနီ နှင့် အကြောပြိုင်းပြိုင်း တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် လီးကြီးကတော့ မျက်စိထဲက မထွက်….
လေပူများ နှင့်ရောပြီး သက်ပြင်းအရှည်ကြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်သည် ။ အာခြောက်သည်ကတကြောင်း… ရင်တုန်နေသည်ကတကြောင်း ..တခါမှ မသောက်ဖြစ်သော ရေခဲရေ သောက်ရန် ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်သည်။ လေအေးတိုက မျက်နှာရော ရင်ဘက်ပါ ထိတွေ့သွားသည်။ မီးခဲပေါ် ရေဖြန်းသလို ရှဲခနဲ မြည်သည်လို့တောင် ဒေါ်မာလာ ထင်သည်။ ဖန်ခွက် ကြည်ကြည်ထဲ ထည့်လိုက်ရာ ရေခဲရေ၏ အအေးနှင့် ဖန်ခွက် အပြင်တွင် ရေသီးလေးများ တွဲခိုသွားသည်။
ဒေါ်မာလာ ဖန်ခွက်ကိုကြည့်ရင်း စောစောက သားမက်၏ စောက်ရည်ပေနေသော လီးကြီးကို ပြန်မြင်နေမိတော့သည်။ အတွေးအာရုံကို ဖျက်ကာ မော့သောက်လိုက်သည်…။ ဆူးရှထုံကျဉ်သော ခံစားမှုက လည်ချောင်းတလျှောက် ဆင်းသွားလေသည်။ …
“အား..ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်…. ချစ် အပေါ်က တက်ဆောင့်ပေးမယ်လေ..”
“ဖြစ်ပါ့မလား ပန်းမြတ်ရယ် ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ဟာကို….”
“အင်း…ဖြေးဖြေးတော့ လုပ်နော်… ချစ်”
အောင်ခန့် ပက်လက်အနေအထားနှင့် လီးကြီးကတော့ လွတ်တော့မဲ့ ဒုန်းပျံသဖွယ်…။ ပန်းမြတ် နှုတ်ခမ်းလေး အသာ ကိုက်ရင်း ဗိုက်ကလေး ပင့်ကာ.. ထိုင်ချလိုက်သည်..။အောက်က အောင်ခန့်က မသိမသာ ကော့ပေးထားသည်။ လီးသည် ဖုတ်ဖုတ် အတွင်း တရစ်ချင်း ဝင်သွားပြီး အဆုံးရောက်တော့ ပန်းမြတ် ခဏငြိမ်လိုက်သည်..။ အနေအထား အခြေအနေ ကိုကြည့်ပြီး အသာ ပြန်ကြွလိုက်သည်။
အတွင်းထဲကတော့ မနာ သို့ပေမဲ့ အဆုံးမှာ နဲနဲတော့ ပိတ်ကာကာကြီး ဖြစ်နေသည်။ ကိစ္စမရှိ ..နဲနဲ မြန်မြန်လေး ဆောင့်ကြည့်သည်..။ အနည်းငယ် အောင့်သော်လည်း အရှိန်တက်နေသော ကာမဖီးက ပိုကောင်းနေသည်။ ပန်းမြတ်ဆောင့်ချက် နဲနဲ မြန်လာသည်။ အောင်မြတ်လည်း ပန်းမြတ် ဆောင့်သည်ဒဏ်ကို ကြာကြာ မခံနိုင်ပဲ လီးရေများ ပန်းမြတ် ဖုတ်ဖုတ် ထဲ ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။
(စကားချပ်.. ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၏ ခံစားချက်နှင့် ၎င်းနှင့် အတူနေသော ယောကျ်ားများ၏ ခံစားချက်များ ကွဲလွဲနေပါက သည်းခံ ဖတ်ရှုပေးပါရန်)
အောင်မြတ် ကိစ္စပြီးသည်နှင့် ကိုယ်ပေါ်မှ ပန်းမြတ်ကို အသာလှဲချပေးရင်း ..
“ကို.. ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်ကွာ… ပေနေတာတွေလဲ သန့်ရှင်းရင်းပေါ့…”
ဟုဆိုကာ…အိပ်ယာမှ ထလိုက်သည်။ စောစောက မချွတ်လိုက်ရသော အင်္ကျီချွတ်ပြီး အဝတ်ခြင်းထဲ ပစ်ထည့်လိုက်သည်။
“ရေမချိုးခင် ရေဆင်းသောက်လိုက်ဦးမယ်နော်… ချစ်..”
ပန်းမြတ် စကားပြန်မရတော့ နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်ပျော် သွားပေပြီ။ အိပ်ပျော်နေသော ပန်းမြတ်ပါးကို နမ်းလိုက်ရင်း ရေသောက်ရန် အိမ်အောက်ရှိ ရေခဲသေတ္တာနားသို့ ဆင်းခဲ့လေသည်။
ဒေါ်မာလာ ရေခဲရေကို ဇိမ်ခံသောက်နေရာမှ ခြေသံလိုလိုကြားသဖြင့် မီးဖိုခန်းမှ အမြန်ထွက်လိုက်သည်။ တအိမ်လုံး မီးပိတ်ထားသဖြင့် အပြင်မှ အလင်း ခပ်မှိန်မှိန်တို့တော့ ရှိနေသည်။ ခြေသံကြားရာ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့သားမက် အောင်ခန့်…။ အဝတ်နှင့်တူသည်ဆိုလို သဘက်ကလေးတောင်မပါ..။ ယောကျ်ားတစ်ယောက် ရှိသင့်သည့် ရုပ်ရည်.. ရင်အုပ်တို့က ချွေးအနည်းငယ်စို့လို့..။ ပြီးတော့ အောင်ခန့် လီးကြီး တစ်ချီးပြီးသော်လည်း ပြန်မကျသေး.. ထောင်လို့ မတ်လို့နေဆဲ..။
အင်းလေ သူလဲ မိန်းမ ဗိုက်ကြီးနေတော့ ဘယ်ဝပါ့မလဲဟု ဒေါ်မာလာ တွေးလိုက်မိသည်။ တကယ်လို့သာ သားမက်မဟုတ်ပဲ တခြား သူစိမ်းသာ ဒီနေရာမှာသာဆို ဒေါ်မာလာ ပြေးပြီး စုပ်မိလေမလား… သို့မဟုတ် နောက်ကဖတ်ပြီး လီးကြီးကို ကိုင်မိလေမလား … စသည်ဖြင့် အတွေးတို့ကမဆုံး မျက်တောင်ပင်မခတ် သမက်၏ လီးကြီးကို ကြည့်နေမိတော့သည်။ ဒါကို မသိရှာသော အောင်ခန့်ကတော့ ရေသောက်ပြီး အပေါ်သို့ ပြန်တတ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တော့သည်။
“ညက ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်ရဲ့လား..”
စားနေသာ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး၏ တိတ်ဆိတ်နေမှုကို ဒေါ်မာလာ ဖျက်စီးရင်း ပြောလိုက်သည်။ အောင်ခန့် ကိုယ်ဟာ့ကိုယ် မလုံသလို ဖြစ်နေမိသည်။ ပန်းမြတ်ကတော့ သူမဟုတ်သလိုနှင့်..
“ပျော်ပါတယ် မေမေရဲ့….ဒါနဲ့ ကိုရေ ချစ် ဗိုက်က ၇ လထဲတောင် ရောက်လာပြီဆိုတော့ သားလေး လိုချင်လား မီးမီးလေး လိုချင်တာလား”
“ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရတဲ့ ကလေးက ကိုယ့်ရတနာ ပဲပေါ့ ချစ်ရယ်”
“အာ ..မရဘူးကွာ ပြော… သားသားလေးလား မီးမီးလေးလား…”
ဟု အောင်ခန့် တစ်ယောက် စိတ်မပါတပါ ပြောလိုက်သည်။ ဒါကို ပန်းမြတ် စိတ်တိုင်းကျပုံမရ…။ သူ့အမေ ဒေါ်မာလာဘက် လှည့်ပြန်သည်။
“မေမေရော ဘာလေး လိုချင်လဲ”
“ညည်းယောကျ်ားရော မေမေရော ဘာလေးရရ ရင်ခုန်ရအောင် အန်ဒရာဆောင်းတောင် မရိုက်ခိုင်းဘူး မဟုတ်လား….။ ကဲ မနက်စာ ကောင်းကောင်းစား စကားမပြောနဲ့တော့”
ဟု ပြောလိုက်တော့မှ ပန်းမြတ် ငြိမ်ကျ သွားသည်။ သို့သော် သိပ်ကျေနပ်ပုံမရ…။ မျက်နှာက မကျေနပ်သည့် မျက်နှာ..။ သို့သော် သိပ်မကြာလိုက် မျက်နှာ တမျိုး ထပ်ပြောင်းသွားသည် နာကျင်သည့် အမူ အရာ…။ အောင်ခန့် ပန်းမြတ်ကို ကြည့်ရင်း….
ထိုအခြေအနေတို့အရ… စားလက်စ မနက်စာကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး အောင်ခန့်နှင့် ဒေါ်မာလာတို့ ဆေးရုံသို့ သုတ်ခြေတင်ရတော့သည် မဟုတ်ပါလား။
အောင်ခန့် တစ်ယောက် ဖုန်းလေးထဲမှ ပုံလေးများကို ကြည့်ရင်း ပြုံးနေမိသည် ။ ထိုဖုန်းကို ထုတ်ကြည့်မိတာလဲ တစ်နေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိ ..။ ထိုပုံကို ကြည့်မိသည်ကလည်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိ…။ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သမီးလေးအပေါ် ချစ်သော ချစ်ခြင်းတို့ကို အောင်ခန့် မည်သို့မျှ ပုံမဖော်နိုင် ။ ချစ်သည် မြတ်နိုးသည် တွယ်တာသည် ဟူသော ခပ်နိမ့်နိမ့် အသုံးမျိုးနှင့် သမီးလေး မထိုက်တန်…. ထိုထက်လည်း ပိုပြောစရာမရှိ ။ တွေးနေတုန်း…
ပန်းမြတ် ဆီက ဖုန်းဝင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကိုရေ…ဒီနေ့ည ချစ်ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ဆုံပွဲရှိလို့ သွားမှာ … အဲဒါ ကို့ကို လှမ်းပြောတာ”
“ကလေး နို့ဆာနေမယ်လေ ချစ် ..မသွားလို့ ဖြစ်ရင် မသွားပါနဲ့လား”
“ကလေးက နို့ဗူးစို့နေတာပဲ …မသွားလို့ မရဘူး…”
“ဟိုရောက်ရင် ကလေးအတွက် မတည့်တာတွေ စားမိမှာစိုးလို့ ပြောတာ”
“မသိဘူးကွာ… ဒီမှာ အကုန်ပြင်ပြီးနေပြီ သွားမှာပဲ… ပန်းမြတ်က ချုပ်ချယ်တာ မကြိုက်ဘူးနော်..”
“ဒါဆို ကလေးကို နို့တိုက်သွား…..ဟလို…ဟလို…”
အောင်ခန့် ဖုန်းချ ပြီး ခေါင်းခါလို့သာ…….။ ဒေါ်မာလာ တစ်ယောက်ကတော့ မြေးရပြီဆိုကတည်းက အလုပ်မသွားတော့ သမက်ဖြစ်သူနဲ့သာ အလုပ်တွေ အကုန် လွဲထားလိုက်သည်။ သားအချစ်မြေးအနှစ်ဆိုသလို လက်ပေါ်က အောက်ကို မချ နို့တိုက်ချိန်မှ လွဲရင် ကလေးက ဒေါ်မာလာ လက်ထဲမှာ …။ ကလေး အမေဖြစ်သူ ပန်းမြတ်ကိုတောင် ကလေးက သိပ်မခင်တွယ်… အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်မာလာကိုပဲ အမေလို့ ထင်နေလားမသိ။
အခုလည်း နို့ဗူးကို စို့လိုက် ပါးစပ်က ထုတ်လိုက် ပြန်ထွေးလိုက် ပြန်စို့လိုက်နှင့် လုပ်ချင်သလို လုပ်နေသည်။ ဒေါ်မာလာကတော့ မြေးလုပ်သမျှ အကုန် ကြည့်ကောင်းနေသည်။
အသံကြားရာဘက် ဒေါ်မာလာ ကြည့်လိုက်ရာ ပန်းမြတ်သဇင်…။ ၆ လက်မ ဒေါက်ဟု ခေါ်သော ဒေါက်ဖိနပ် နှင့် တမိုက်စကပ် ဟုခေါ်သော မိနီစကပ်… လည်ဟိုက်အင်္ကျီတိုတို….။ နို့စို့ကလေးရှိတော့ နို့တို့က တင်းပြီး လုံးထွက်နေသည်။
“ဟဲ့…..ဟဲ့….သမီး …… အောင်မလေး…. ဒါက ဘယ်သွားမလို့လဲ..”
“သူငယ်ချင်း မိတ်ဆုံစားပွဲလေ မေမေရဲ့…”
“ညည်းအေ….ကလေးမွေးထားတာ ….ကိုယ့်ကလေးကိုလဲ ဂရုစိုက်ပါဦး”
“အာ…မေမေကလဲ မေမေရှိနေတာပဲ…သမီးက မွေးပြီးကတည်းက ခုမှ ထွက်ရတာ..”
“မတိုက်တော့ဘူး..နို့နံတွေ နံကုန်မယ် ပြီးရင် မေမေ့ မြေးမက သေးပေါက်ဦးမယ်…”
“ဟဲ့….အော် ..အဲလို မပြောရဘူးလေ ကိုယ်မွေးထားတာ မဟုတ်တာကျနေတာပဲ….”
“ဟဲ့…မိပန်း….ဘယ်လို ကလေးမှန်း မသိဘူး…..”
စကားပင် မဆုံးသေး အိမ်တခါး ဒုန်းခနဲ ပိတ်ကာ…ထွက်သွားလေပြီ။
ည၈ နာရီထိုးလေပြီ…. ဒေါ်မာလာတစ်ယောက် မြေးချီရင်း သမီး နှင့် သားမက်အလာ မျှော်နေမိသည်။ တနေကုန်လည်း ဒီ မြေးနှင့် ၂ ယောက်တည်း မဟုတ်လား။ ကလေးကတော့ သူ့အမေမျှော်ရင်း နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နေလေပြီ။
ခြံတံခါး ဖွင့်ဝင်လာသော အောင်ခန့်ကို ကြည့်ရင်း ဒေါ်မာလာ နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
“ဟုတ် ပြန်လာပြီ အမေ …သမီးလေး အိပ်နေပြီလား… ပေးပေး အမေ သားကို”
“အေး ..ရော့..သေချာ ပွေ့ထားဦးနော်….”
“ပန်းမြတ် ပြန်မလာသေးဘူးလား အမေ”
“အေး မလာသေးဘူးကွယ်… သား အိမ်ထဲဝင်နှင့် မြေးလေးကို ပုခတ်ထဲထည့်ထားလိုက် သူအိပ်နေပြီ အမေ ခြံတံခါး ပိတ်လိုက်ဦးမယ်”
ဟု ဆိုကာ ဒေါ်မာလာ ခြံဝအရောက်…
“အင်း…မဆိုးနဲ့ကွာ သူများခြံဝကြီးမှာ… အို…အား….”
ဒေါ်မာလာခြံဝ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လူရိပ် ၂ ခု..။ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ယောက်က ဒူးထောက်ပြီး ဖင်နားလေးကို မျက်နှာအပ်ထားသည်။ အရှေ့တစ်ယောက်တော့ ကုန်းသယောင်ယောင် ခါးလေး ကုန်း ပြီး ဒူးကို လက်ထောက်ထားသည့် ပုံမျိုး..။ ထိုနေရာက အိမ်ရှေ့ဆိုသော်လည်း သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိလို့ အမှောင် အရိပ် ကောင်းကောင်းရှိသောနေရာ..။ ဒေါ်မာလာ ကြည့်နေရင်းနှင့်ပင် အရိပ်၂ ခု ပုံပြောင်းသွားသည်။ ဒူထောက်နေသူမှ မတ်တပ်ရပ်ပြီး နောက်က ဆောင့်ချလိုက်သည်။
ဒေါ်မာလာ ..ထိုသူ ၂ ယောက် ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာ ချက်ချင်း သိလိုက်သည်။ ခုခေတ်ကလေးတွေ မလွယ်ပါလား..ဟု မှတ်ချက်ပြုလိုက်သည်။
“ အိ…အား…အီး…မြန်မြန်လုပ်ကွာ… အိမ်ကလူတွေ သိကုန်မယ်”
ထိုစကားသံကိုကြားတော့ ဒေါ်မာလာ ဒေါသထွက်သွားသည်…။ ထိုအသံမှာ တခြားလူ မဟုတ် ပန်းမြတ်သဇင် အသံ ..။
“ဟဲ့…ပန်းမြတ် …ဒီကို လာခဲစမ်း…”
“အမိုက်မ……ခွေးလို လုပ်နေကြတယ်… ဟုတ်လား…”
ဟု ဆိုကာ..ပန်းမြတ် နားရွက်ကို ပျက်ထွက်မတတ် လိမ်ဆွဲလိုက်သည်။ နောက်က ဆောင့်နေသော ကောင်က အခြေအနေမဟန်မှန်း သိသောကြောင့် ဘောင်းဘီ ဆွဲတင်ပြီ လစ်သွားလေပြီ။ ပန်းမြတ်ကတော့ ဒူးမှာရှိသော အောက်ခံဘောင်းဘီ အလိမ်လိုက်ကို ဆွဲတင်ဖို့ပင် အချိန်မရတော့ပဲ မိခင်၏ ဒေါသတကြီး ဆွဲခေါ်ရာနောက် ပါသွားလေပြီ။
“နင်…ကလေးလည်း ရှိရဲနဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းနေတယ် ဟုတ်လား…. နင့်ကိုမွေးတာ ငါ့အမှားပဲ”
“သမီး လွတ်လပ်ချင်တယ် …သမီးကို မတားနဲ့.. ဒီကလေးမွေးပြီး ကတည်းက သမီးကို ဘယ်သူ ဂရုစိုက်ကြလို့လဲ”
“ဟဲ့ ..လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်ရင် အိမ်ထောင်မပြုနဲ့ပေါ့…. ညည်းဟာ့ညည်း ကမြင်းချင်တိုင်း ကမြင်းရအောင် ဒီအိမ်က ဇရပ်မဟုတ်ဘူး…. နောက်ပြီး အဲလောက် ဖင်သရမ်းရအောင် နင်က ဖာသည်မ…. လား…”
အောင်ခန့် မည်သည့်စကားမျှပြောရန် မရှိတော့ …။ ပုခတ်ထဲမှ သမီးလေး မျက်နှာကိုကြည့်ရင်း မရေတွက်နိုင်သော အရက်ခွက် ပေါင်းများစွာ ပါးစပ်ထဲသို့ လောင်းထည့်နေမိတော့သည် မဟုတ်ပါလား။
“သားရေ ..အောင်ခန့် ထပါဦး…”
အောင်ခန့် ညက သောက်လက်စ ဧည်းခန်း ထိုင်ခုံပေါ်မှာပဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ ဒေါ်မာလာ တစ်ယောက် သမက်ဖြစ်သူ လက်ထဲသို့ စာတစ်စောင် ထည့်ပေးလိုက်ရင်း
“ပန်းမြတ် မရှိတော့ဘူး သား.. သူ ထွက်သွားပြီ..”
“နေဦး ..အမေ သား စာဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်..”
ဟု ဆိုကာ..စာကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့… ပန်းမြတ် လက်ရေးလှလှလေးနှင့်….
ချစ်သော ကိုကို နဲ့ မေမေ
ပန်းမြတ် မိုက်မှန်း သိပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ပန်းမြတ် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ် ရပ်ကြည့်ချင်တယ်။ ကလေးတွဲလောင်းနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘဝမျိုး ပန်းမြတ် မကြိုက်ဘူး။ ပန်းမြတ် လွတ်လပ်ချင်တယ်။ အချစ်နဲ့ ဘဝဟာ တကယ်တော့ အများကြီးကွာတာ ပန်းမြတ် သိအောင် ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်။ သမီးလေးကို ဂရုစိုက်ပေးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သမီးလေးက သူ့ကို ချစ်တဲ့ သူတွေကြားမှာ နေခဲ့ရတာဆိုတော့ စိတ်လဲ ချပါတယ်…။
အောင်ခန့် ဘာမှ မပြောလိုတော့ ။ ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ကို ဆေးလိပ်ဗူးထဲမှ ထုတ်သောက်ရင်း ယောက္ခမဖြစ်သူ ဒေါ်မာလာကို ကြည့်လိုက်ရာ …
“မင်း မိန်းမက လောကကို လွယ်လွယ်လေး ထင်နေတယ်…. ငါ့ သမီးလေးတော့ ဒုက္ခ ရောက်တော့မယ်… သားရယ် အခုတော့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ……”
ပြောနေရင်းနှင့်ပင် ဒေါ်မာလာ မျက်ရည်တို့ ကျလာလေပြီ…။ အောင်ခန့် စိတ်အိုက်လာသောကြောင့် သောက်လက်စ ဆေးလိပ်ကိုင်ကာ အပြင်သို့ ထွက်ခဲ့လေတော့သည်။ သောက်လက်စ ဆေးလိပ်က အငွေ့တထောင်းထောင်းနှင့် အောင်ခန့် ပါးစပ်တွင် တပ်လျှက် …..။ အောင်ခန့် တစ်ယောက် ဆေးလိပ် အတော်လေး သောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ပန်းမြတ် အိမ်က ထွက်ပြီး ကတည်းကပင်။
ဒေါ်မာလာ ပိုင်သော Bar သို့ ရောက်လာသော စာများကို Bar မန်နေဂျာ ဖြစ်သော အောင်ခန့် တစ်စောင်ချင်း ကြည့်နေလေသည်။ ထို အထဲတွင် တစ်စောင်က ထူးထူးခြားခြား နိုင်ငံခြားမှ DHL နှင့်ပို့လိုက်သော စာ…။ စာကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ပန်းမြတ်သဇင်၏ စာ…။ စာကတော့ သူအခု UAE မှာ အဆင်ပြေတဲ့ အကြောင်း သူ့ ငယ်ရည်းစားနှင့် လက်ထပ်ပြီး ဘဝတစ်ခု ထူထောင်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဘဝတစ်ခု ထူတောင်ပြီးရင် သြဇီမှာပဲ အခြေချ နိုင်ငံသား ခံယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ကွာရှင်းစာချုပ် ပို့လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ရေးထားသည်။
အောင်ခန့် ခပ်မဲ့မဲ့ ပြုံးလိုက်ရင်း အော် …မင်းရဲ့ သမီးလေးကို မေ့နေပြီပေါ့.. ဟု တွေးပြီး ဒေါ်မာလာထံ ဖုန်းခေါ်ကာ.. ပန်းမြတ်ထံမှ စာတစ်စောင် ရောက်နေကြောင်း ပြောလိုက်လေသည်။
“ကိုအောင်ခန့်တို့ကတော့ အလုပ်လုပ်သလား မမေးနဲ့ဗျာ… ခင်ဗျားရှိမှ ဒီဆိုင်က ဝန်ဆောင်မှု ပိုကောင်းလာတယ်”
“မဟုတ်တာပဲဗျာ.. ကျနော်က မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်ပါဗျ…”
ဧည့်သည်နှင့် နှုတ်ဆက်စကားပြောရင်း ရုံးခန်းထဲသို့ ဝင်လာရာ.. ဒေါ်မာလာ ရောက်နေသည်ကို တွေ့တော့ အောင်ခန့် အနည်းငယ်တော့ အံသြသွားသည်။ သောက်လက်စ ဝိုင်ကို ပါးစပ်ထဲလောင်းချရင်း ဒေါ်မာလာ အခြေအနေကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သမီးဖြစ်သူ၏ စာကို တွေတွေဝေဝေ ဖတ်နေသည်။ အင်္ကျီအပျော့သားတို့က ကိုယ်ပေါ်သို့ အိကျနေသည်။ မီနီစကပ်နှင့် တွဲဖတ်ဝတ်ဆင်ထားပြန်သည်။ မိတ်ကပ်ပါးပါးလေး လိမ်းထားရုံမှ လွဲပြီး ဘာမှမပါသည့် သဘာဝမျက်နှာအလှ…။
“သား အခု ဘာဆက်လုပ်မလဲ..”
“ဘာမှ လုပ်မရတော့တာ အမေလည်း သိနေတာပဲ..”
“အော်..မွေးရကျိုးနပ်တဲ့ သမီး… အမေနေကောင်းလား ဆိုတာတောင် မပါဘူး… ဒီအမေ မုဆိုးမကြီးကို ပစ်သွားရက်တဲ့ သမီး..”
ပြောရင်းဆိုရင်း ဝိုင်များကို မော့ သောက်လိုက်သည်။ မော့သောက်လိုက်မှ သတိထားမိတာက ဝိုင်ပုလင်းကုန်ခါနီးနေပြီ ဖြစ်သည်။ အောင်ခန့် ဝိုင်ပုလင်းကို ဖောက်ပြီး တငုံလားပဲ သောက်ရသေးသည်။ မိတ်ကပ်မလိမ်းထားသော ဒေါ်မာလာ ပါး ၂ ဖက်က ပန်းရောင်သန်းနေပြီ။ မျက်ဝန်းအိမ်ထဲမှာတော့ မျက်ရည် အပြည့်…။
“သမီးလေး တစ်ယောက် မွေးထားပါတယ် .. အားကိုးရမလားမှတ်တယ်… မြေးတစ်ယောက်ထားခဲ့ပြီး ဒုက္ခတွေနဲ့ ပစ်ထားခဲ့တယ်… အခုတော့ ဘယ်သူကို အားကိုးရမှာလဲ…ဟင့်…”
ပြောရင်းဆိုရင်း ဒေါ်မာလာ ငိုသံလိုလို ပါလာလေပြီ။ အောင်ခန့် ဒေါ်မာလာကို ကြည့်နေမိတော့သည်။ ဒေါ်မာလာ အောင်ခန့်ကို အားကို တကြီး ကြည့်ရင်း အောင်ခန့် လက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
“သားပဲရှိတော့တယ်.. အရင်ကတော့ သမီးလေးကို မျှော်လင့်ခဲ့သေးတယ်..”
“စိတ်မပူပါနဲ့ အမေရယ်… သား အမေ့ အတွက်ရော အမေ့မြေး အတွက်ရော ကြိုးစားပါ့မယ်.. စိတ်ချပါ အမေရယ်”
ပြောနေရင်း အောင်ခန့် ထိုင်ရာမှ အနည်းငယ် ထရင်း ဒေါ်မာလာပါးပေါ်မှ မျက်ရည်တို့ကို သုတ်ပေးရန် လက်အလှမ်း…။ လှမ်းနေသော လက်ကို ဒေါ်မာလာ ရိုက်ချလိုက်သည်။
“ငါ အခုထိ မင်းယောက္ခမပဲ ရှိသေးတယ်နော်… မလေးမစားနဲ့..”
ဟု ဆိုကာ ဒေါ်မာလာ ထထွက်သွားသည်။ ကာမကိစ္စနှင့် ကင်းကွာနေသော ဒေါ်မာလာမှာ အခုထိ ချောတုန်း ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ပြောစရာမရှိ…။ ဇွန်သင်ဇာလောက် မကိတ်ပေမဲ့ အခုခေတ် မော်ဒယ်တွေလောက်တော့ အိပ်နေသလောက်ပဲ ရှိသည်။ အောင်ခန့် မစားရအညှော်ခံ ဘဝနှင့် ဒေါ်မာလာ နောက်ကျောကို ကြည့်ရင်း.. ဝိုင်တကျိုင် မော့ချလိုက်တော့သည်။
“ဟဲ့ ကောင်းလေးတွေ ဟိုဝိုင်းက ခေါ်နေတယ်….. ဒီကိုလာဦး”
ဒီနေ့ ဒေါ်မာလာ လန်းလန်းဆန်းဆန်း တက်တက်ကြွကြွ Bar ကောင်တာတွင် ထိုင်ပြီး အသေးစိတ်ညွန်ကြားနေသည်။ ဒေါ်မာလာ ညွန်ကြားနေတော အောင်ခန့်လည်း အလုပ်လုပ်ရတာ ထိုင်ပင် မထိုင်ရ။ အောင်ခန့် ကောင်တာနား အရောက်..
“သား..ပင်ပန်းနေပြီလား…ဒီနေ့ အိမ်ပြန်ရင် အမေနဲ့ လိုက်ခဲ့..”
အောင်ခန့် ခေါင်းငြိမ်ပြပြီး ဘာမှမပြောပဲ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ညနေ အိမ်ပြန်ချိန် စကား တစ်ခွန်းမှ မပြောမိ….။
“တခါတလေ သူများမောင်းတဲ့ ကား လိုက်စီးရတာ ဇိမ်ကျသားပဲ”
“ဘာလိုလိုနဲ့ ဆိုင်မလာရတာတောင် ၇ လလောက်ရှိပြီ… စားသုံးသူ ပိုများလာတယ်နော်..”
“တော်သေးတာပေါ့ မင်းရှိနေသေးလို့ အားကိုးနေရတာ..”
“မင်းကလည်း အဲဒီ ဟုတ်ဆိုတာပဲ တတ်လား… ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး… ပြေးကြည့်မှ ဒီ ၂ ယောက်ရှိတာ… သူက စကားကို သေချာပြန်မပြောဘူး..”
“အမေ ကျနော် ကားမောင်းနေလို့ပါ..”
အောင်ခန့် ပြန်ပြောလိုက်တော့မှ ဒေါ်မာလာတစ်ယောက် ငြိမ်ကျသွားပြီး ဟိုဘက်လှည့်သွားသည်။ ဒေါ်မာလာကို အောင်ခန့် တစ်ချက် လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်း.. ရည်းစားတစ်ယောက်ကို စိတ်ဆိုးသလို ဆိုးနေသော ဒေါ်မာလာကိုကြည့်ပြီး အောင်ခန့် ပြုံးလိုက်မိတော့သည်။
အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဒေါ်မာလာ ကလေးကို အိမ်ဖော်လက်မှ ယူလိုက်ပြီး နို့ဘူးတိုက်ကာ ကြည့်နေသည်။
“ကလေးက အမေ့ကို သူ့အမေ မှတ်နေလား မသိဘူးနော်… ဟဲ.. ဟဲ”
အောင်ခန့်ပြောသော်လည်း ဒေါ်မာလာကတော့ ပြန် မပြော… ကလေးသာ မြူနေသည်။ အောင်ခန့်က ထပ်ပြီး
“အင်းလေ အခုလည်း အမေပဲ ပြုစုနေရတာ မဟုတ်လား ကလေး အမေပဲပေါ့”
“ကလေးက တော်တော် ချစ်ဖို့ကောင်းလာတယ် နော်… ကြည့်ကြည့် မင်းကို ပြုံးပြနေတယ်…”
ဟု ဆိုကာ ရင်ခွင်ထဲမှ ကလေးကို အနည်းငယ် ပင့်ပြီးပြလေသည်။ သို့သော် အောင်ခန့် မြင်တာက ကလေးကို မဟုတ်.. လည်ပင်း ခပ်ဟဟလေး ဖြစ်နေသည့် အင်္ကျီအောက်က ဘော်လီ အဖြူရောင်နှင့် ၎င်းဘော်လီနှင့် ပြည့်ရုံလောက်သာရှိသော သွေးကြောစိမ်းများ ရောယှက်ပြီး ဝင်းနေသော နို့ တစ်စုံ…။ ထိုအချိန် ကလေးက ကန်လိုက်သောကြောင့် ကွာသွားသော အနှီးကို သပ်ပြီး ကလေးကို ပြန်လုံးပေးရာ မီနီစကပ် ခပ်ပွပွလေးက ပါလာပြီး ပေါက်တံ ဖွေးဖွေးသွယ်သွယ်တို့နှင့် အတူ…။ အောင်ခန့် ပြုံးရုံသာ ပြုံးပြပြီး အိပ်ခန်းဆီသို့ တက်ခဲ့လိုက်တော့သည်။
အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ ပေါက်ထွက်မတတ် တောင်နေသော လီးကို ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး အပြင်ထုတ်လိုက်သည်။ လီးရည် ချွဲချွဲတို့က ဘောင်းဘီနှင့် ကပ်ပြီး အမျှင်လိုက်ပင် ဖြစ်နေသေး၏…။ အောင်ခန့် ကိုယ်လုံးတီးနှင့် အိပ်ယာပေါ် လှဲချလိုက်လေသည်။
အိပ်ခန်းထဲတွင် အိပ်နေသော ဒေါ်မာလာ သူမက.. ညအိပ်ဝတ်စုံ အနီရောင် ပါးပါးလေးနှင့် ကပိုကရို ….။ အောင်ခန့် ဝင်လာတော့ ဒေါ်မာလာ အလန့်တကြား ထထိုင်လိုက်သည်။ မပြောမဆို ဒေါ်မာလာ၏ ညအိပ်ဝတ်စုံ အနီရောင်ကို လှန်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ တွန်းလှဲပြီး နို့ ၂ လုံးကို ဆုပ်နယ်လိုက်သည်။ ပက်လက်ဖြစ်နေသော ဒေါ်မာလာ မျက်လုံးလေး မှေးဆင်းသွားပြီး ဖီးယူနေသည်။
အောင်ခန့်က နို့ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်နေရာမှ အောက်လျှောချရင်း.. ခြေထောက် ၂ ချောင်းကို ကားလိုက်သည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဖြူဖြူလေးမှာ ကွက်နေသော အရာလေးနှင့် ဖောင်းပြီး တင်းနေသော အရာတစ်ခု…။ အောင်ခန့် အောက်ခံဘောင်းဘီ အပေါ်ကပဲ ယက်လိုက်သည်။ စောက်ရည်နံ ခပ်သင်းသင်းက နှာခေါင်းဝတွင် ခပ်စူးစူးလေးရလေသည်။ ဖောင်းပြီး တင်းနေသော နေရာကို ယက်လဲယက် လက်နှင့်လဲ ပွတ်ပြီး အောင်ခန့် ကိုယ်ကို မတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ဒေါ်မာလာကို ပုခုံးမှ ကိုင်ပြီး ဆွဲထူလိုက်သည်။
ဟုဆိုကာ ဘောင်းဘီ ချွတ်ပေးလိုက်လေသည်။ ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးက ထိပ်တွင် လီးရည် ချွဲချွဲတို့ တွဲခိုနေသည်။ ဒေါ်မာလာလည်း လီးကြီးကို ကိုင်ကာ ပါးစပ်နှင့် တေ့လိုက်သည်။ နှုတ်ခမ်းဝအရောက် လီးရည်နံ ညှီစို့စို့တို့ကြောင့် ဒေါ်မာလာ ရုန်းရန် လုပ်သော်လည်း အောင်ခန့် ပါး ၂ ဖက်ကို လက်နှစ် ညှစ်လိုက်သောကြောင့် ပါးစပ် ဟသွားသည်။ ဟနေသော ပါးစပ် ထဲသို့ လီးကို တဆုံးသွင်လိုက်လေသည်။ ဒေါ်မာလာ ခေါင်းကို ကိုင်ရင်း ပါးစပ်ကို ပိပိ အမှတ်နှင့် ထိုးဆောင့်တော့သည်။
လီးမှာတော့ သရေတွေ လရေတွေ လားမသိ ပြောင်ပြီ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေလေပြီ။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားလျှင် အောင်ခန့် ပြီးတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် ခေါင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီး အောင်ခန့် လှဲအိပ်လိုက်သည်။ ဒေါ်မာလာမှ အပေါ်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ နူးညံသော ပိပိ အတွင်းသားတို့၏ အထိအတွေ့ကြောင့် အောင်ခန့် ပြီးတော့ မလိုလို ဖြစ်သွားသည်။ ဒေါ်မာလာလည်း မျက်လုံးလေးမှိတ် ခေါင်းလေးမော့ကာ.. ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖီးယူပြီး ထိုင်ချလိုက်လေသည်။
ဆောင်ချက်တို့က ခပ်ကြမ်းကြမ်း … အောင်ခန့်ကလည်း အောက်က ကော့ကော့ပေး… သိပ်မကြာခင် အောင်ခန့် တစ်ယောက် တကိုယ်လုံးရှိ အကြောများ လှုပ်ခတ်ပြီး လရေတို့ ဒလဟော အခဲလိုက် အရှိန်နှင့် ပန်းထွက်သွားတော့သည်။
အောင်ခန့် မောမောနှင့် တစ်ရူးတရွက် ဆွဲယူလိုက်သည်။ ပြီးမှ ဗိုက်ပေါ်တွင် အပုံလိုက် ဖြစ်နေသော လရေများကို တစ်ရူးနှင့် သုတ်လိုက်သည်။ လေပူတို့ တစ်ချက် မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်း.. အော် မိန်းမရှိတာတောင် မလိုးရပဲ စွန်ပစ်ခံရတဲ့ ငါ့ဘဝ… ယောက္ခမ ချောချော တောင့်တောင့် ရှိတာတောင် မလိုးရတဲ့ဘဝ…။ ဂွင်းထုရသည်ကို မနှစ်သက်သော်လည်း ဒီနေ့ ညနေတော့ ယောက္ခမကို မှန်းထုလိုက်ရသော အရသာက လိုးရသည့် အရသာထက်ပင် ပိုကောင်းသေး၏ ။စိတ်ကူးထဲမှာတောင် ဒီလောက်ကောင်းရင် …အပြင်မှာ ဆိုရင်တော့လား.. ဟု စိတ်ထဲတွင် ကြိတ်တွေးရင်း လရေများ သုတ်ထားသော တစ်ရှူးကို အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်ထည့်လိုက်လေတော့သည်။
“အသားတွေက သိပ်မလတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်…”
“အသားတွေ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားရင် ဖြစ်တတ်တာပဲလား…”
“အရင်ဆိုင်မှာတုန်းကတော့ ဘယ်လို စီမံထားလဲ မသိဘူး အစ်ကို အသားတွေက ဒီအတိုင်းပဲ”
စားဖိုမှုးနှင့် အောင်ခန့် ခေါင်းချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးနေရပြီ။ အခု ပြသနာက အစားအသောက်ပြသနာ။ စားသုံးသူများမှ လာသော ပြသနာဖြစ်ပြီး အသားများ မလတ်ဆတ်ခြင်းဟူသော မပြေလည်မှု။ အောင်ခန့် အသားတုံးကို ဟိုဘက် ဒီဘက်ကြည့်လိုက်သည်။ အနည်းငယ် ဖြူနေပြီး ဖွာဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်နေသည်။
“ကဲကဲ..အဲပြသနာ အတွက် ဘာမှ မပူနဲ့ အမေ လူတစ်ယာက် ခေါ်လာတယ်..”
ဟု ပြောရင်း ဒေါ်မာလာ ဝင်လာလေသည်။ သူမနောက်မှာ သူမ နှင့် မတိမ်းမယိမ်းဟု ထင်ရသော အမျိုးသမီး တစ်ဦး…
“ဒါ အမေ့အသိ တစ်ယောက်ရဲ့ အမျိုးသမီး ဒေါ်ကလျာ တဲ့..”
အောင်ခန့် လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ..။ သူသိခဲ့သော ကလျာ ဖြစ်နေလေမလားလို့….။ သေချာပါသည်.. သူသိသော ကလျာ.. ကလျာမှ ကလျာ အစစ်။
“အော်..ဒါနဲ့ ကလျာ ဒါ တို့ပြောပြောနေတဲ့ တို့သားမက်… ဒီက မန်နေဂျာ ကိုအောင်ခန့်ပေါ့”
ဟု ကလျာ အလိုက်သင့် နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း… အောင်ခန့်ကို ပြုံးပြလိုက်သည်။
“လာ ကလျာ ဒို့ဆိုင်ရောက်တုန်း တစ်ခုခု စားပြီးဝေဖန်ပေးပါဦး… စားဖိုမှုကြီး လက်စွမ်းပြလိုက်ပါဦး..”
ဟုဆိုကာ ဒေါ်မာလာနှင့် ဒေါ်ကလျာ တို့ ပြန်ထွက်သွားလေတော့သည်။ အောင်ခန့်ကတော့ ပြုံးရင်း ကျန်ခဲ့ပြီး အရင် အတိတ်ကို အတွေး ပုံချဲ့မိတော့သည်မဟုတ်ပါလား။ ။
“ဒီစာကြောင်းမှာ ..ပြုလုပ်သူ ..ခံယူသူ …ကံ.. ကတ္တာ ကြိယာ ..နာမဝိသေသန.. စတဲ့ ဟာတွေကို အရင်ကြည့်ရတယ်… ပြုလုပ်သူဟာ…. စာကြောင်းနောက်…………”
အောင်ခန့် စာကို စိတ်မဝင်စား ဂိုက်ဆရာမ၏ ပြောပုံ ဆိုပုံသာ ကြည့်နေမိသည်။ ခပ်ဟိုက်ဟိုက်လေး ဖြစ်နေသော ရင်ဘက်ကိုသာ ကြည့်နေမိ၏ …။ ဘောလီ ခပ်ချောင်ချောင် ဖြစ်နေသော ဂိုက်ဆရာမလေး၏ နို့သီးခေါင်းကို မြင်ရလို မြင်ရငှား ခါးလေးဆန့်ပြီး မသိမသာ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ဂိုက်ဆရာမလေးမှ အောင်ခန့်ကို ပြန်ကြည့်ရင်း
“စာကို စိတ်ဝင်တစား လုပ်ရတယ်ကွ… စိတ်မဝင်စားရင် နှစ်ချင်းပေါက် ဘယ်တော့မှ မအောင်ဘူး”
“ဟုတ် စိတ်မဝင်စားတာ မဟုတ်ပါဘူး… အစ်မက ဒီနေ့ ပိုလှ နေသလားလို့”
“ဟား..ကောင်လေး စာမရဘူးထင်တယ် … မြှောက်ပြောနေတယ်..တို့က မြှောက်ပြောလဲ ရိုက်မှာပဲ..”
ဟု ဆိုကာ… အောင်ခန့် ပေါင်ရင်းနားကို လှမ်းရိုက်လိုက်သည်။ လှမ်းရိုက်လိုက်သော လက်က ပြန်မသိမ်းပဲ ဆက်တင်ထားရင်း…
“ကဲပါ ..စာ ဆက်သင်မယ်..လိုက်ကြည့်နော်…”
ဟု ဆိုကာ..စာဆက်သင်လေသည်။ အောင်ခန့်ကလည်း ရင်ဘက်ကို ဆက်ကြည့်နေမိသည်။ စာရှင်းနေသော ဂိုက်ဆရာမလေးသည် ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဘောပင်ထည့်ထားသော ခွက်ကို လက်နှင့် တိုက်ချမိသွားသည်။ ဆရာမ ကောက်မည် အပြု အောင်ခန့်က ဦးအောင် ကောက်လိုက်သည်။ စာပွဲအောက်မှ ပြန့်ကျဲနေသော ဘောပင်များကို ကောက်ရင်း.. ဂိုက်ဆရာမ အောက်ပိုင်းကို ကြည့်မိလိုက်သည်။
ဂျင်းစကပ် တိုတို၏ အောက် အောက်ခံဘောင်းဘီ အနီလေးက အောင်ခန့်ကို ဖိတ်ခေါ်နေသလိုလို။ ဂိုက်ဆရာမလေးကပဲ တမင် ကားပြထားသည်လား အောင်ခန့် မပြောတတ်။ အောင်ခန့် ဂိုက်ဆရာမ ပေါင်ကြားထဲသို့ ခေါင်း နှင့် အတင်းတိုးဝင်ရင်း ဘောင်းဘီအနီလေးကို နမ်းလိုက်သည်…. သေးနံလိုလို ပိပိနံလိုလို ခပ်သင်းသင်းလေး..။
အောင်ခန့် ခေါင်း ကျိမ်းတတ်သွားသည်။ ဂိုက် ဆရာမ၏ ပေတံစောင်းနှင့် ခေါက်လိုက်သော လက်သံက အတော်ပြင်းလေသည်။ အောင်ခန့် စိတ်ကူယဉ်တာ လွန်သွားသည်။
“စာကို သေချာ လိုက်ကြည့်”
ဟု ဆိုကာ စာကို ဆက်ရှင်းပြနေသော ဂိုက်ဆရာမလေး ဒေါ်ကလျာ……..။ ။’
၁၀ တန်းကျောင်းသား ဖြစ်သူ အောင်ခန့် တစ်ယောက်တည်း ရှိတာကြောင့် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် MP4 စက်လေးနှင့် နားကြပ်တပ်ကာ ဂျပန်ကား ကြည့်နေသည်။ ထိုဂျပန်ကားထဲတွင် ဂျပန်မ အသားဖြူဖြူက လေးဘက်ထောက်ရင်း နောက်မှ ဂျပန်ကြီးမှ လိုးဆောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်..။ ဂျပန်ကားတို့ ထုံးစံအတိုင်း ဂျပန်မ အသံစူစူက နားကွဲမတတ်…။ အောင်ခန့် မနေနိုင်တော့ပဲ JJ ဘောင်းဘီဟုခေါ်သော ဘောင်းဘီအပွကို အနည်းငယ်လျှောပြီး လီးကို ကိုင်လိုက်သည်။ မျက်စိမှိတ်လိုက်တော့ ဂိုက်ဆရာမလေးပုံ ပေါ်လာလေသည်။
ဂျပန်မ အသံကို ဂိုက်ဆရာမလေး အသံနှင့် ကူးပြောင်း စိတ်ကူးလိုက်သည်။ ဂိုက်ဆရာမလေးက လက် ၂ ဖက်နှင့် အောင်ခန့် လီးကို ထုပေးသည်ဟု တွေးရင်း အရှိန်ပါပါ ထုလေသည်။ ပါးစပ်ကလဲည်း …အား….ဆရာမ လုပ်လုပ်…ကောင်းတယ် ဆရာမရယ် ..အရမ်းကောင်းတယ်….။
“ဆရာမ ဒီနေ့လာတာ စောပါလား..”
“ဟုတ်တယ်ရှင့် ဒီနေ့ သွားစရာလေးရှိလို့ စောစော ထွက်လာတာ..”
အောင်ခန့်အမေနှင့် ဒေါ်ကလျာတို့ လှေကားခွင်မှာ ဆုံတွေ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အောင်ခန့်အမေက ဈေးသွားရန်အဆင်း .. ခပ်သုတ်သုတ် တက်လာသော ကလျာနှင့် အဆုံ ဖြစ်လေသည်။
“သားကတော့ ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုပြီး MP4 လေး ဖွင့်ဆော့နေလေရဲ့လေ..”
“ဟုတ်…အန်တီ့သားက ဉာဏ်တော့ ကောင်းပါတယ်…”
“ဉာဏ်သာ ကောင်းတာ ဆရာမရေ.. အပေါင်းအသင်းကပေါ့.. ဂိမ်းလေးနဲ့ဆိုတော့ ဒီနှစ် ၁၀ တန်းတောင် အောင်ပါ့မလား မသိဘူး”
“အဲဒါကတော့ အန်တီ့သား ကြိုးစားမှုပဲပေါ့။ ကျမကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သင်ပေးမှာပါ အန်တီ”
“ဒါဆို ဈေးသွားလိုက်ဦးမယ် ဆရာမရေ.. သူ့အဖေ အတွက် ဝက်သားလေး ဝယ်ချင်လို့”
ဟုဆိုကာ ကလျာ အပေါ်သို့ တက်ခဲ့လေသည်။ အိမ်တံခါး အနည်းငယ် ဟနေသည်။ အော်… ဒီကလေးတော်တော် အဆော့ မက်တာပဲ ဟု ကောက်ချက်ချမိတော့သည်။ တံခါး ဖွင့်ပြီး အထဲဝင်ကာ တံခါးသေချာ ပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ အောင်ခန့် အခန်းရှိရာသို့ လှမ်းခဲ့သည်။
တံခါးဖွင့်လိုက်တော့ ကလျာ မြင်ရကြားရသော မြင်ကွင်းကြောင့် ကလျာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားသည်။ ကျောပေးပြီး MP4 ကို လက်တစ်ဖက်ကကိုင်ကာ နောက်တစ်ဖက်က လှုပ်နေပြီး တကိုယ်လုံး တုန်နေသည်။ ပါးစပ်မှလည်း…အား…. ဆရာမ လုပ်လုပ်… ကောင်းတယ် ဆရာမရယ် .. အရမ်းကောင်းတယ်…. ဟု အော်နေသေးသည်။
ကလျာ အသာလေးဝင်လာပြီး အောင်ခန့် ဘာလုပ်နေလဲဟု သိချင်သောကြောင့် အနားကပ်ကြည်လိုက်တော့… ကလျာ အံသြရမလား .. ဒေါသထွက်ရမလား မသိဖြစ်သွားသည်။ MP4 ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဂျပန်လိုးကား …ဂျပန်မက အောက်မှ ကားထားပြီး ဂျပန်ကြီးလီးမှာ အဝင်အထွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်နေလေသည်။ လီးအဝင်အထွက်.. တို့နှင့်အတူ ဂျပန်မ ဖုတ်ဖုတ်မှ ကပ်ပါလာသော ဖုတ်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား။ ပြီးတော့… အောင်ခန့်ကို ကြည့်လိုက်တော့ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ကြီးမားနေသော လီးကြီး … လီးထိပ်မှာ မှိုဖူးကြီးလို ပြောင်ပြီ နီမြန်းနေလေသည်။
ကလျာ ဖုတ်ဖုတ်မှ တစ်ချက် ဆစ်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ ဖိုနှင့်မ တွေ့ဆုံချိန်တွင် ဆရာကျောင်းသား မရှိ မောင်နှမ မသိတော့သည်ကို ကလျာ လက်ခံလိုက်သည်။ အောင်ခန့် ထုနေသော လီးကြီးကို ကလျာ မျက်တောင် မခပ် ကြည့်မိနေတော့သည်။ တစုံတယောက်က မိမိကိုကြည့်နေသည်ဟု စိတ်က ထင်လိုက်သော အောင်ခန့်တစ်ယောက် မျက်လုံးဖွင့်ပြီး နောက်သို့ လှည့်ကြည့်မိသည်။ ဖီးတက်နေသော အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် လက်တဖက်က လီးကိုင်ရက်သားနှင့် ..။
လှည့်ကြည့်မိတော မြင်ကွင်းကြောင့် အောင်ခန့် ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားလေသည်။ သူ့လီးကို မျက်တောင်မခတ် ကြည့်နေသော ဒေါ်ကလျာ…။
ကလျာ တစ်ယောက် စောစောက မြင်ကွင်းကို သူမသိသလို မမြင်သလို နေရင်း စာရှင်းပြနေသည်။ အောင်ခန့်ကတော့ မျက်နှာပူတာလား ရှက်တာလားမသိတော့.. ကလျာ မျက်နှာကို မကြည့်ရဲ ကိုယ်ရေးထားသော စာအုပ်ကိုသာ စိုက်ကြည့်နေမိသည်။ စာရှင်းတာကတော့ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်..။ အောင်ခန့် တစ်ယောက် အရဲစွန့်ပြီး ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ပါစေတော့ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ.. စာရှင်းနေသော ကလျာအား ..
“အစ်မ ခုနက မြင်တာတွေကို အမေ့ကို မပြောပါနဲ့နော်..”
“ပြောမယ်ဆိုရင်… မင်းဘာလုပ်ချင်လဲ… မင်းက ငါ့ကိုလည်း ထည့်ပြီး စိတ်ကူးသေးတယ်.. အဲဒါ ဘာသဘောလဲ”
ကလျာ ပြောနေတာ ဒေါသသံမပါမှန်း သိသော်လည်း.. တိုင်ပြောမယ် ဆိုသောကြောင့် အောင်ခန့် ခေါင်းကြီးသွားသည်။ ထို့ကြောင့် ရိုက်လျှင်လဲ ခံရတော့မည်.. တိုင်လျှင်လဲ ခံရတော့မည်… ဂိုက်ဆရာမ နောက်မလာရင်လဲ စာကျက်ရ သက်သာသည်..။ မထူးဇာတ်ခင်းတာပဲ ကောင်းတယ်ဟု တွေးရင်း..
“ကျနော်… ကျနော်.. အစ်မနဲ့ နေချင်လို့.. အစ်မကို မှန်းပြီး လုပ်နေတာ….”
ဟု နောက်ဆုံးပိတ် အိပ်နှင့်လွယ် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် တဆုံး ပြောချလိုက်တော့သည်….။
တကယ်တမ်း အဖြစ်က ကလျာသည် သူမရည်းစားနှင့် ယနေ့ ဂိုက်ပေးရသော အချိန်တွင် တည်းခိုခန်းသွားရန် စီစဉ်ပြီးသား..။ သို့သော်.. အောင်ခန့်အမေနှင့် မတွေ့ခင်က ဖုန်းဝင်လာပြီး သူမရည်းစား မလာဖြစ်တော့ကြောင်း ပြောလို့ ရည်းစားနှင့် စိတ်ကောက်နေသော အချိန်…။ နောက်တစ်ခုက ကာမဆန္ဒ နိုးကြားလွယ်သော ကလျာအဖို့ ရည်းစား ချိန်းဆိုကတည်းက အောက်ခံဘောင်းဘီ ကွက်အောင် ပိပိမှ ချစ်ရေကြည်များ ထွက်ခဲ့သည်။ ချိန်းတဲ့နေ့ ရောက်တော့လည်း ထိုအတွေးကြောင့် ပိပိထဲမှ အရည်ကြည်တို့ တစစ်စစ် ထွက်နေပြီ..။ ဒီထက်ဆိုးတာက အောင်ခန့် ပြုမှုနေသော မြင်ကွင်းက သူမအား ထပ်လောင်း ထကြွသောင်းကျန်းစေသည်။
သို့သော်.. ဆရာမဂုဏ် ကို မလေးမစား လုပ်မည်စိုးသောကြောင့်သာ ခပ်တင်းတင်း နေရခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ဘာ…. ဆိုသော အသံ နည်းနည်း ကျယ်သွားမှန်း ကလျာကိုယ်တိုင်လဲ သိသည်။ စိတ်ထဲမှာ ထိန်းထားသော ကာမစိတ်တို့ကြောင့် တဖက်က အသံကျယ်သွားခြင်းသာ….။ ဒါကို အောင်ခန့်က မသိ.. မိုးကြိုးပစ်ပြီဟု ထင်လိုက်လေသည်။ ကလျာက အောင်ခန့်ကိုဆက်ပြီး
အောင်ခန့် ကိုယ်လုံးသာ လှည့်လိုက်သည်။ မျက်နှာတော့ မမော့ရဲ…။ ခေါင်းခေါက်တော့မလား.. ရိုက်တော့မလား.. သို့မဟုတ် ငါ မသင်တော့ဘူးများ ပြောပြီး ထပြန်မလား မသိ…။ မျက်စိမှိတ် ခေါင်းငုံရင်း ရတော့မည့် အပြစ်ဒဏ်ကို စောင့်နေလေသည်။
အောင်ခန့် မရဲတရဲ မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ဘာလုပ်လုပ် အောင်ခန့် ခံယူရတော့မည် မဟုတ်ပါလား။
“မင်း ကတိတော့ ပေးရလိမ်မယ်…”
“တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး မင်း ဒီနှစ် ၁ဝ တန်း အောင်အောင် ဖြေရမယ်..။ နောက်ပြီး ငါသင်တဲ့စာကို ဂုဏ်ထူးပါအောင် ဖြေရမယ်…။ နောက်ပြီး ဘယ်ကိစ္စမဆို မင်းနဲ့ငါနဲ့ ၂ ယောက်ပဲ သိရမယ်…။ ပေးနိုင်မလား”
“အဲဒီကတိတွေ ပေးနိုင်ရင် မင်းလုပ်ချင်တာ အစ်မ အကုန် လိုက်လျောမယ်…”
အောင်ခန့် နားမလည်သလို ကြည့်နေစဉ် ကလျာ၏ လက် ၂ ဘက်က အောင်ခန့် ပခုံးပေါ်သို့ ရောက်သွားပြီ ဖြစ်လေသည်။
အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော အောင်ခန့် သူကြည့်ဖူးသည့် ဇာတ်ကားထဲကလို ကလျာ့ နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်လိုက်သည်။ ကလျာက တွန်းလိုက်ပြန်သည်။
“အော်..မင်းမှာလဲ ခိုးချင်တာကပြာလို့ လက်ကချာလို့ ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ… နမ်းတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေး အောက်နှုတ်ခမ်းကိုပဲ သကြားလုံး စုပ်ပြီး ငုံသလို ငုံရတယ်…”
ဟုပြောကာမှ အောင်ခန့် ရှက်သလိုလို ဖြစ်မိသည်။ ကလျာ့ ပါး ၂ ဖက်ကို လက်နှင့် ထိန်းရင်း စောစောက ကလျာပြောသလို အောက်နှုတ်ခမ်းလေး အသာ စုပ်လိုက်သည်။ ကလျာက အလိုက်သင့် ဆိုသလို အောင်ခန့် အပေါ်နှုတ်ခမ်းကို ပြန်စုပ်လေသည်။ ခဏကြာတော့ ကလျာ လျှာနှင့် အောင်ခန့် နှုတ်ခမ်းကို သပ်ရင်း ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ပေးလေသည်။ အခြေအနေ ပြောင်းလာသော အနမ်းကြောင့် အောင်ခန့် အလိုက်သင့် ဆိုသလို လျှာကို ပြန်စုပ်ရင်း နမ်းနေမိသည်။ ကာမ ဒီကရီ တတ်လာခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အောင်ခန့် ကလျာနို့ကို အပေါ်မှ ညှစ်လိုက်သည်…။
“အား.. မရမ်းမညှစ်ရဘူးလေ.. နာတာပေါ့… ပြီးတော့ အင်္ကျီတွေ ကြေမွကုန်မယ်… ခဏနေဦး အင်္ကျီ ချွတ်လိုက်ဦးမယ်..”
ဟု ဆိုကာ အင်္ကျီကို ချွတ်နေလေသည်။ ဘော်လီပဲ ကျန်တော့သော ကလျာ အနောက်ကိုလှည့်ရင်း ဘော်လီချိတ် ဖြုတ်ခိုင်းလေသည်။ တခါမှ ဘော်လီချိတ် မဖြုတ်ဖူးတာကြောင့် အောင်ခန့် တော်တော်နှင့် ချွတ်မရ ….။ ဘော်လီချွတ်ပြီးသွားသောအခါ ကလျာ ရှေ့သို့ ပြန်လှည့်လိုက်သည်။ ကလျာ၏ လုံးကျစ်နေသော နို့ကို မြင်သောအခါ အောင်ခန့် မနေနိုင်တော့ပဲ ကလျာကို တွန်းလှဲကာ… နို့သီးခေါင်းကို စုပ်ယူလိုက်သည်။ ကလျာ ကော့တတ်လာသော်လည်း လူပျို နွားသိုးကြိုးပျက်၏ စုပ်အားကြောင့် နို့သီးခေါင်းလေး နာတတ်လာသည်။
“အီး…အင်း.. စောစောက နမ်းသလိုပဲ အသာလေး လုပ်ရတယ်ကွ .. မင်းနဲ့တော့ ခက်နေပြီ..”
“အစ်မရယ်..သင်ပေးမှတော့ အကုန် သင်ပေးတော့နော်…”
ကလျာ မျက်စောင်းလေး တချက်ထိုးလိုက်ရင်း… ပက်လက်လှဲနေရာမှ ထလိုက်သည်။ ပြီးမှ အောင်ခန့် JJ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချလိုက်သည်။ ထောင်မက်နေသော လီးကြီးမှာ တဆတ်ဆတ် လှုပ်နေသည်။ လီးထိပ်မှာလည်း လရေကြည်များနှင့်..။ ကလျာ ဘာမပြော ညာမပြော အောင်ခန့် လီးကို ကုန်းစုပ်လိုက်သည်။ ပါးစပ်၏ အနွေးဓါတ်တို့က အောင်ခန့် တကိုယ်လုံး ပြန့်နှံသွားသည်။ လက်တဖက်ကလည်း ထုပေးနေပြီး ပါစပ်စုပ်အားတို့က ပါးချိုင့်ဝင်အောင် စုပ်နေသည်။
“အစ်မ….အ…မ …ဆက်မလုပ်နဲ့တော့… ကျနော် ပြီးတော့မယ်…..”
ထိုအခါမှ ကလျာ အစုပ်ရပ်ရင်း လေးဘက်ထောက်လိုက်သည်။ စကပ်အတို ဝတ်လာတာကြောင့် လုံးနေသော ဖင်ကြီးနှင့် အတူ အောက်ခံဘောင်းဘီ အနည်းငယ် မြင်ရသည်။ အောင်ခန့် စကပ်ကို အသာ မတင်လိုက်သည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီကို တဖြည်းဖြည်း ချွတ်လိုက်သည်။ ဖုတ်ဖုတ်နေရာတွင် အောင်ခံဘောင်းဘီနှင့် ကပ်ပြီး ချွတ်လိုက်ရာ အောက်ခံဘောင်ဘီနှင့် စောက်ဖုတ်ကြား စောက်ရည်ကြည်တို့ မျှင်တန်းနေသေးသည်။
စောက်ပတ်နံ ခပ်သင်းသင်က လီးကို ထောင်သည်ထက် ထောင်စေလေသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီပင် အဆုံးထိ မချွတ်နိုင် အောင်ခန့် စောက်ပက်ကို လျှာနှင့် ယက်မိတော့သည်။ ချဉ်ချဉ်ငံငံ အရသာက ဘာအရသာနှင့်မှ မတူ ကောင်းမွန်လှသည်။ စောက်ဖုတ်အကွဲထဲ လျှာနှင့် ထိုးလိုက်သည့် အခါ နူးညံသော အထိအတွေ့နှင့် အရသာ ပိုစူးလာလေသည်။
အောကားတွေသာ ကြည့်ဖူးပြီး အပြင်မှာ တကယ်မမြင်ဖူးသော စောက်ဖုတ်ကို အသာဖြဲကြည့်လိုက်သည်။ နီထွေးထွေး ရောင်နှင့် စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းအောက် စောက်ရည်များနှင့် ခပ်ချွဲချွဲ ဖြစ်နေသော ထိပ်လေး ခပ်ညိုညိုရှိသော စောက်ပတ် အတွင်း နှုတ်ခမ်းသား ၂ ခု..။ ထိုအရာကို အောင်ခန့် လက်ညိုးလေးနှင့် ထိလိုက်တော့ ကလျာ ဆက်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ လက်ညိုးလေးကို အကွဲတလျှောက်ပွတ်လိုက်တော့ စောက်ရည်များ ကျလာလေသည်။ လက်ညိုးလေးနှင့် ဟိုစမ်းစမ်း ဒီစမ်းစမ်း အပေါက်လေးကိုရှာလေ ကလျာက တအီးအီး ..တအဲအဲ နှင့် ဖီးတတ်လေ ဖြစ်နေသည်။
အောင်ခန့် ရုတ်တရက် ဆိုသလို လက်ညိုးက စောက်ခေါင်းထဲ ဝင်သွားလေသည်။ ကလျာ တစ်ယောက် တဆက်ဆက် တုန်နေတော့သည်။ အောင်ခန့်လည်း လက်ညိုးထုတ်ပြီး လီးနှင့် အပေါက်တည့်တည့်ဟု ထင်သော နေရာကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ထိုးတုန်းကတော့ အပေါက်တည့်တည့်ဟု မှန်းထိုးလိုက်သော်လည်း လရေနှင့် စောက်ရည်တို့ကြောင့် အပေါက်လွဲကာ စောက်စိကို ချော်ထိုးမိသည်။
အောင်ခန့် မလိုးဖူးသည်သာရှိသည် ဝင်မဝင်တော့ သိသည်။ နောက်တကြိမ် ထပ်ထိုးပြန်သည် ထပ်ချော်ပြီး စောက်စိကို ထိမိပြန်သည်။ တတိယ အကြိမ် လွဲပြီးသည့်နောက် ကလျာ စိတ်မရှည်တော့..။ ချော်ထိုးမိတိုင်း စောက်စိကိုထိပြီး လီးနှင့် စောက်ပတ်ကို ပွတ်ဆွဲမိသလို ဖြစ်တာကြောင့် ကလျာ စောက်ပတ်ကလည်း ယားလှပြီ….။ လူပျိုအစစ် အပေါက်ပျောက်နေတာကြောင့်
“မင်း ပက်လပ်လှန်လိုက်တော့…ငါပဲ လုပ်ပေးတော့မယ်…”
ဟု စိတ်မရှည်သော လေသံနှင့် ပြောလေသည်။ အောင်ခန့် ဘာမှ မပြောတော့ပဲ ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးက ဒုံးပျံထိပ်ဖူးကြီးလို ထောင်မတ်နေသည်။ ကာမဆိပ်တတ်နေသော ကလျာ ရှက်မနေတော့ပဲ.. လီးထိပ်ကို ကိုင်ကာ စောက်ပက် အဝတွင်တေ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း ထိုင်ချလိုက်သည်။ အောင်ခန့် ခေါင်းလေးထောင်လာသည် အထိ ဖီးတတ်လာလေသည်။
တရစ်ချင်း တထစ်ချင်း စောက်ပတ်ထဲသို့ ဝင်သွားသော ခံစားချက် နှင့် နူးညံ့သော စောက်ခေါင်း၏ အထိအတွေ့က အတော်ကို ကောင်းမွန်လေသည်။ကလျာလည်း ခေါင်းလေးမော့ရင်း ဖီးခံလေသည်။ စောက်ရည်နှင့် လီးရေတို့က အောင်ခန့်၏ ကျိုးတို့ကျဲတဲ လီးမွှေးများတွင် ရွှဲနှစ်နေသည်။ ကလျာလည်း အပေါ်မှနေပြီး မြင်းစီးနေသလို ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းနှင့် ဆောင့်လေသည်။ အချက် ၅၀ လောက် ဆောင့်ပြီးသောအခါ..
“အား …အစ်မ…ကျနော်…. ပြီးတော့မယ်….. ပြီး….”
ဟု အောင်ခန့် ပြောသံကြားသော အခါ ကလျာ စောက်ပတ်မှ လီးကို ချွတ်ပြီး ပါးစပ်နှင့် ဆက်ငုံကာ စုပ်ပေးလေသည်။ အောင်ခန့် လီးရည်တို့ ကလျာ ပါးစပ် ပြည့်လုနီးနီး အထိ အရှိန်နှင့် ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။ သုတ်ရည်များကို တစ်ရှူးထဲထွေးထည့်ပြီးနောက် အသစ်တစ်ရွက်ယူကာ.. အောင်ခန့် လီးကို သုတ်ပေးလေသည်။ အောင်ခန့်ကတော့ မထနိုင်သေး..။ ပက်လက်နေသော အောင်ခန့် ရင်ထဲ ကလျာ လှဲချလိုက်လေသည်။ ထိုအချိန် အိမ်တံခါးဖွင့်သံ ကြားလိုက်ရသည်။
အောင်ခန့်အမေက ဈေးဝယ်ရင်း ဆရာမအတွက်ရော သားဖြစ်သူအောင်ခန့် စားရန် သစ်တော်သီး ဝယ်ခဲ့လေသည်။ အိမ်ရောက်သည်နှင့် ဈေးခြင်းတောင်းချကာ သစ်တော်သီး လှီးလိုက်လေသည်။ သစ်တော်သီး စိတ်ပြီသော အခါ ပန်းကန်ထဲထည့်ရင်း အောင်ခန့် အခန်းသို့ ဝင်လိုက်သည်။
“ကဲ နားလည်ပြီနော်… ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်လိုက်.”
ဟု ပြောဆိုနေသော ဂိုက်ဆရာမလေး ကလျာ နှင့် သားဖြစ်သူ အောင်ခန့်အား တွေ့လေသည်။
“ဆရာမ နဲ့ သား စားဖို့ သစ်တော်သီး ဝယ်လာတယ် စားလိုက်ပါဦးနော်..”
“ဟုတ် ..အန်တီ ကျေးဇူးပါပဲ”
ဟု ဆိုကာ ပန်းကန်လှမ်းယူလိုက်ရင်း အောင်ခန့် ရေးနေသာ စာများကို ကလျာ တစ်ယောက် ကြည့်နေလိုက်သည်။ ပန်ကန်ပေးပြီး ပြန်ထွက်သွားသော အခါမှ အောင်ခန့်နှင် ကလျာတို့ ဘောင်းဘီ ပြန်ဝတ်ကြသည်ကိုတော့ အောင်ခန့်အမေ မသိနိုင်တော့ပြီ မဟုတ်ပါလား..။
ဂိုက်ဆရာမလေး ကလျာနှင့် ၁ဝ တန်း ကျောင်းသားအောင်ခန့်တို့ အခြေအနေက အတော်ကိုပင် တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဘယ်လောက်တိုးတတ်သလဲဆိုရင် ကလျာ မလာတဲ့ရက်ဆိုရင် အောင်ခန့် အမေထံမှ စာမေးရန် ဖုန်းတောင်းပြီး Message နှင့် Sex chat လုပ်ကြသည်။ အားမရလျှင် ဖုန်းပြောပြီး Phone Sex လုပ်ကြသည်။ ဒါတင်မက အောင်ခန့် ကို စာမေးလို့ရရင် လီးစုပ်ပေးသည်။ တခါတလေ ကလျာ အောင်ခန့်လရေကို မျိုချတတ်သေးသည်။
အောင်ခန့်ကလည်း ကျန်သော ဘာသာရပ်များကို မရပဲ ရှိရင် ရှိမည်။ ကလျာ သင်တဲ့ ဘာသာကတော့ မေးသမျှ ရလေသည်။ အနည်းဆုံးတော့ မလုပ်ရဘူးဆိုသော နေ့တွေဆို နို့စို့တာ နမ်းတာ အဖုတ်နှိုက်တာ လောက်တော့ အောင်ခန့် လုပ်နေကျ။ ကလျာ လာတဲ့ အချိန်ကိုပဲ အောင်ခန့် မျှော်နေတတ်သည်။
ကလျာကလည်း သူမရည်းစားနှင့် အဆင်ပြေသည်ဟု မရှိတော့။ သူမရည်းစားက အလုပ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်သည်။ အရင်ကတော့ အလုပ်ဟုဆိုလျှင် ကလျာ သည်းခံပေးသည်။ အောင်ခန့်နှင့်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း သူမရည်းစားက အလုပ်ဆိုလျှင် ကလျာ ခွင့်မလွတ်တော့။ အခုလည်း အောင်ခန့် ကလျာဆီကို ဖုန်းဆက်နေသည်။
“ဟယ်လို အစ်မ …”
“အစ်မ အခု ဘယ်မှာလဲ”
“ဘယ်သူရှိလဲ အစ်မ အိမ်မှာ”
“ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူးရှင်… ဘာလဲ… လိုချင်ပြန်ပြီလား… ကိုယ်တော်”
“ဟဲ..ဟဲ.. အစ်မကလဲ ..”
“ကိုယ်တော်ချော မနေ့က အနှိုက်ကောင်းလို့ ဆီးအောင့်နေပြီရှင့်… ဒီနေ့တော့ တော်ပြီနော်”
“အာ အစ်မကလည်း ဒီမှာ ကျနော်က ကိုင်တောင်ထားပြီးပြီ..”
“ကိုင်ထားပြီးလဲ မောင်လေးကြည့်နေကျ ကားလေးကြည့်ပြီး လုပ်လိုက်ပေါ့..”
“အစ်မ အသံ မကြားရရင် ဘယ် ဖီးတက်မလဲ …အာ့ဆိုလဲ ထားပါတော့ အောင်းထားလိုက်တော့မယ်… အစ်မလာတော့ အဝသောက်ရတာပေါ့… ဟဲ ဟဲ..”
“အကျင့်ပုတ်လေး ဘယ်သူက လုပ်ပေးမယ် ပြောလို့လဲ..”
“အော် ဒါနဲ့ .. အစ်မ ကျနော့်ကို ဆုချဖို့ ပြင်ထားတော့..”
“အစ်မ ပြောထားတာ မှတ်မိလား… ကျောင်းစာမေးပွဲမှာ အစ်မသင်တာ ဂုဏ်ထူးထွက်ရင် ဆုချမယ်ဆို..”
“အင်းလေ ..Report Card ရပြီလား .. ဂုဏ်ထူးထွက်တယ်ပေါ့..”
“ဟုတ် ထွက်တယ်လေ ..အဲဒါကြောင့် ဆုချဖို့ လုပ်ထားလို့ ပြောတာပေါ့…”
“ဟုတ်ပါပြီတဲ့ရှင်…ကဲ ဘာလိုချင်လဲ ပြော…”
“အစ်မ စာသင်ချိန် တချိန်လုံး အစ်မနဲ့ လိုးချင်တယ်..”
“ဘာလဲ မပေးဘူးလား …”
“ရောက်မှ ပြောမယ်ကွာ…နော်… ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်..”
“မရှက်ပါနဲ့ အစ်မရယ် ကျနော် အားဆေးသောက်ထားလိုက်မယ် ဒါပဲနော်”
ကလျာ ဒီနေ့ ထွက်လာရတာ ကိုယ့်ဟာ့ကို မလုံမလဲ။ ကုတ်အင်္ကျီအရှည်နှင့် စာအုပ်အချို့ပိုက်ကာ ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုတ်အင်္ကျီ လက်ရှည်မို့ လုံခြုံသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ထိုကုတ်အင်္ကျီအောက်တွင် အဝတ်နှင်တူတယ်ဆိုလို့ တစ်ခုမှ မပါ။ အဖုတ်မွေးတို့ကလဲ ဒီမနက်ကမှ ကိုယ်တိုင်ရိတ်ခဲ့လို့ အမွေးပါသည့်အတွက် လေတိုက်ရင် အဖုတ်က အေးကနဲ..။ ဘယ်သူမှ မသိသော်လည်း ကိုယ်တိုင်တော့ သိနေသည့်အတွက် ရှက်ရှက်နှင့် ဖီးတက်နေတာကြောင့် မျက်နှာက ပန်းနုရောင်ပင် သန်းနေသေး၏..။
လမ်းလျောက်လျှင် ကုတ်အင်္ကျီက လှုပ်သဖြင့် အရင် ဘော်လီပါသည့်အတွက် ဘာမှ မဖြစ်သော်လည်း ယခုတော့ လမ်းလျှောက်တိုင်း ကုတ်အင်္ကျီ အသားက နို့သီးခေါင်းနှင့် လာလာ ပွတ်မိနေသေးသည်။ နို့သီးခေါင်းပွတ်မိလေ အဖုတ်မှ ယားလေ အရည်ကထွက်လေ နှင့် အတော်ပင် အနေရခက်နေသည်။
ထိုသို့ဝတ်လာခြင်း အကြံက ချွတ်ရလွယ်ပြီး ပြန်ဝတ်ရလွယ်သောကြောင့် ဖြစ်သည့်အပြင် အောင်ခန့်ကို ဆုချရန်လည်း ပါသည်။ အရေးထဲ ကားကမလာ..။ လာသည့်ကားကလည်း ကြပ်သိပ်နေသည်။ သို့သော် မတတ်နိုင်။ ကားကြပ်လဲ အချိန်နောက်ကျမည်စိုးသောကြောင့် တက်လိုက်လာခဲ့သည်။ ၃ မှတ်တိုင်သာ စီးရမည် ဖြစ်သောကြောင့် အပေါက်နားမှာပင် စီးခဲ့သည်။
တက်ပြီး သိပ်မကြာခင်ပင် ကလျာ့နားသို့ ယောကျ်ားတစ်ယောက် နောက်က ကပ်နေသည်ကို သတိထားမိလေသည်။ အော် သူနောက်မှတ်တိုင်ဆင်းတော့မလားဟု ကလျာ အနည်းငယ် ဖယ်ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် ထိုသူလည်း ကလျာ တိုးသည့်ဘက်သို့ လိုက်တိုးနေသည်။ ကလျာ အခြေအနေ မဟန်တော့မှန်း သိသော်လည်း နောက် ၃ မှတ်တိုင်ပဲမို့ သည်းခံနေလိုက်သည်။ ဒါကို ဟိုလူက သူကို အခွင့် အရေးပေးသည် အထင်နှင့် တန်းကိုင်ထားသော လက်တဖက် ချလိုက်ပြီး ကလျာ ဖင်နားလေးကို အကဲစမ်း ပွတ်သပ်နေပြီဖြစ်သည်။
ကလျာ ထိုလူကို တချက်လှည့်ကြည်လိုက်သည်။ ထိုလူကတော့ သူမဟုတ်သလို ရုတ်တည်ကြီးဖြင့်..။ မီးပွိင့်ကလည်း ဒီနေ့မှ ၂ ခါရှိပြီ .. မိနေပြန်သည်။ ထိုလူမှ ကလျာ ဖင်ကို ပွတ်နေရာမှ တဖြည်းဖြည်း အရှေ့ ရောက်လာလေသည်။ ကလျာ တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်လေးကို ကျုံ့ရင်း ကာကွယ်သော်လည်း ထိုလူလက်မှာ ကုတ်အင်္ကျီထဲသို့ပင် ရောက်နေလေပြီ။
ဘာမှ မဝတ်ထားသော ကလျာ တစ်ယောက် ပေါင်အသာလေး လိမ်ပြီး တန်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားလေသည်။ ထိုလူကလည်း အတွေ့အကြုံရှိဟန်တူသည်။ ပေါင်းလေး တလျှောက် ပွတ်ပြီး အပေါ်သို့ တဖြည်းဖြည်း တက်လာလေသည်။ ကလျာ တစ်ယောက် ကုတ်အင်္ကျီဝတ်လို့ ပူတာလား .. လူကြပ်လို့ ပူတာလား အနှိုက်ခံရလို့ ပူတာလားမသိ ချွေးများ ကျလာလေသည်။
ထိုလူ ပေါင်ကို ပွတ်သပ်နေတော့ ကလျာ ခြေလိမ်ထားသည်က အနည်းငယ် အားလျော့သလို ဖြစ်သွားသည်။ ဒီ အခွင့်အရေးကို စောင့်နေသော ထိုလူသည် ကလျာ့ အဖုတ်လေးကို လက်ခလယ်နှင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ ယခင်ကတည်းက စောက်ရည်ထွက်နေသော ကလျာ၏ အဖုတ်ထဲ ထိုလူလက်ခလယ်က တစ်ဆစ်လောက် ဝင်သွားသည်။ လက်ကို အငြိမ်မနေပဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် ပွတ်လိုက်ဆွဲလိုက် လုပ်နေသည်။ ကလျာ့ဖင်ကိုလည်း အနောက်မှ ထိုလူ့လီးကြီးနှင့် ထောက်ထားသေး၏။ ကလျာ့ .. စိတ်ရိုင်းတို့က ထိုနေရာတွင်ပင် ထိုလူအား ကုတ်အင်္ကျီလှန်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်ချင်တော့သည်။
ကလျာ တစ်ယောက် စပယ်ယာ၏ မှတ်တိုင်အော်သံကိုသာ စိတ်ထဲတွင် ရေတွက်မှတ်သား မိတော့သည် မဟုတ်ပါလား။ ။
မှတ်တိုင်ရောက်လို့ ကလျာ တစ်ယောက် ခပ်သုတ်သုတ် ဆင်းလာသော်လည်း အနောက်မှ ထိုလူ ပါလာသေးသည်။ ကားပေါ်မှာတုန်းက ကလျာ့နား နားကပ်ပြီး ညီမလေး လိုက်ခဲ့ပါလား ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်..ဟု မကြားတကြား ကပ်ပြောခံရသေး၏။ အောင်ခန့် အိမ်အပေါ်သို့ရောက်အောင် ခပ်သုတ်သုတ် တက်ခဲ့လေသည်။ အိမ်ထဲဝင်ဖို့ အောင်ခန့်အမေ တံခါ လာဖွင့်ပေးလို့သာ တော်တော့သည်။ ထိုလူက အနောက်က ကပ်ပါလာတာကိုး။
ဘယ်မိန်းကလေးမဆို မည်မျှလောက် တဏှာကြီးကြီး လူစိမ်းနောက်လိုက် အလိုးခံဖို့ ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်မှန်း ထိုလူသိသင့်သည်ဟု ကလျာ စိတ်ထဲမှာ ပြောနေမိသည်။ အောင်ခန့် အမေက ဝမ်းသာအားရဖြင့်
“ဆရာမကို စောင့်နေတာ … ဒီမှာကြည့်ပါဦး ဆရာမရယ်… ဆရာမ သင်တဲ့ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးတောင်ပါတယ်.. သား အရင်ကဆို ဒီဘာသာက အမြဲ အောင်မှတ်ရရုံပဲရတာ…”
“သူ့ကြိုးစားမှုပေါ့ အန်တီရယ်… ကျမက သင်ရုံ သင်ပေးနိုင်တာ ..”
“အော် …ဆရာမ .. သားက သူ့အခန်းထဲမှာ ဆရာမကို မျှော်နေတယ် ကြွားရအောင်တဲ့…”
“ဟုတ် ..ကျမ အခုပဲ ဝင်တော့မှာပါ..”
“ဆရာမရေ.. နားညီးဖို့သာ ပြင်ထားလိုက်တော့ သားက သူ စာမေးပွဲ ဘယ်လိုဖြေကြောင်း အစ အဆုံး ပြောပါလိမ်မယ်… ဒီကလေးက ကလေးစိတ် မကုန်သေးဘူး ဆရာမရဲ့”
ကလျာ ခေါင်းလေးသာ ငြိမ့်ပြရင်း အင်း ..နားညီးမှာမဟုတ်ဘူး… သေးပေါက်ချိန်သာ မရမှာ… ခိခိ.. ကိုယ်အတွေးနှင့် ကိုယ် ပြုံးလိုက်မိသည်။ ကလေးစိတ် မကုန်တာတော့ မှန်လိမ်မယ် လူကိုတွေ့တာနဲ့ နို့စို့ချင်နေတဲ့သူ.. ဟု စိတ်ထဲမှ ပြန်ပြောရင်း အောင်ခန့် အခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့တော့သည်။
အောင်ခန့် အခန်းထဲရောက်တော့ ကလျာ ထိုင်တောင်မထိုင်ရသေး။ အောင်ခန့်မှ…
“ဟဲ..ဟဲ..အစ်မ Report Card တွေ့ပြီးပြီ မဟုတ်လား ..”
“ရှူး… တိုးတိုးပြောပါ ကိုယ်တော်ချောရယ် ..မင်းအမေ ကြားသွာဦးမယ်..”
ဟု ပြောနေတုန်းပင် ရှိသေးသည် အောင်ခန့် မတ်တပ်ရပ်နေသော ကလျာ့နားကို ရောက်လာပြီး ကုတ်အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ မိမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားသော ကလျာ့အားကြည့်ပြီး အောင်ခန့် ပျော်သွားသည်။ အဖုတ်မွေးတွေက အရင်ကလို ခပ်ကျဲကျဲ မဟုတ်တော့ပဲ ပြောင်ပြောင်လေးနှင့် ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေသည်။ ဂွဆုံတွင် အဖုတ်ကွဲရာလေးမှအပ ဘာမှမရှိ။
အောင်ခန့် ဒူးထောက်ပြီး ကလျာ့ခြေ တဖက်ကို ပုခုံးပေါ်တင်ကာ အဖုတ်လေးကို လှမ်းနမ်းလိုက်သည်။ အရင်ကလို စောက်နံ့ သိပ်မရတော့ မွှေးနေသည်ဟုပင်ထင်ရသည်။ ကလျာတစ်ယောက် နံရံကို မှီရင်း စောစောက အနှိုက်ခံထားရသည့် အရှိန်နှင့် အခု အောင်ခန့် ယက်ပြီး စောက်စိကို စုပ်ပေးနေသော အရှိန်ရောပြီး ဖီးတတ်ကာ အောင်ခန့် ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်ပြီး ပေါင်ကြားထဲ အတင်းကပ်ထားမိသည်။
အောင်ခန့်အထင် ကလျာ့ စောက်ရည်များ ယခင်ကထက် ပိုများနေသည်ဟု ထင်မိသည်။ ပေါင်မှာလည်း စောက်ရည် စီကြောင်း လက် ၂ လုံးခန့် အရှည် စီးကြောင်းတစ်ခု…။ အောင်ခန့် ယက်နေရာမှ မနေနိုင်တော့ပဲ ရုတ်တရတ် မတ်တပ်ရပ်ရင်း လီးကြီးကို ကလျာ့ အဖုတ်ထဲ ဆောင့်ပြီးထိုး ထည့်လိုက်သည်။
အသံ အနည်းငယ် ကျယ်သွားသည်…။
“အစ်မကလည်း မအော်နဲလေ အမေက ဟိုဘက်အခန်းမှာတင်ကို..”
ဟု အောက်သံနှင့်ပြောင်းရင်း အောင်ခန့် အောက်ခံဘောင်းဘီကို ကလျာ့.. ပါစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်..။
မတ်တပ်ရပ် အလိုးခံရသောကြောင့် အဖုတ်၏ အတွင်းသားတို့က နေရာမကျ။ အောင်ခန့်လီးကြီးက အဖုတ်နံရံကို ဆောင့်ကာ တရစပ် ထိုးညှောင့်နေလေသည်။ ၂ ရက်မျှ စုထားသော အားတို့ကြောင့် အဝင်အထွက် ဆောင့်ချက်တို့က ကြမ်းသည် ။ နို့သီးခေါင်းကို စုပ်သည့်အားနှင့် နို့တဖက်ကို ညှစ်နေသည့် အားကလည်း သန်လှသည်…။ ကလျာတစ်ယောက် မတ်တပ် အလိုးမခံဖူးသည် ဖြစ်သောကြောင့် အဖုတ်လှိုင်ခေါင်းထဲ ပြည့်သိပ် ပွတ်တိုက်နေသော လီး၏ အဝင်အထွက် တို့ကြောင့် မကြာမီပင် တကိုယ်လုံးရှိ အကြောပေါင်းစုံတို့ တုန်ခါပြီး ပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်သော ကာမ အထွဉ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိသွားလေတော့သည်။
အဖုတ်၏ ရှုံ့မှု ပွမှု နှင့် အတူ အောင်ခန့် လီးကို အဖုတ်ကြွတ်သားတို့နှင့် လီးကို သရေပင်စီးထားသလို ညစ်ခြင်းကို အောင်ခန့် ခံစားရသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကလျာ ပြီးသွားမှန်း အောင်ခန့် သိလိုက်သည်။ အောင်ခန့် အရှိန်လျှော့ပြီး ကလျာ့ကို နံရံအား လက်နှင့် ထောက်ရင်း အဖုတ်တွင် လီးကို အသာတေ့ကာ ဆောင့်လိုက်သည်။ ကလျာတစ်ယောက် ပြီးသွားသော အရှိန်ကြောင့် အဖုတ်အဝမှာ ခပ်ကြပ်ကြပ်လေး ဖြစ်နေသည်။ အောင်ခန့်၏ လီးကို အတင်းဆွဲညှစ်ထားသလို ဖြစ်တာကြောင့် အရမ်းကောင်းသော အရသာမျိုး…။
ကလျာကတော့ လက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ရင်း အောင်ခန့် လီးဒဏ်ကို ကြိတ်ခံရတော့သည်။ အောင်ခန့် သိပ်ကြာကြာ မလိုးနိုင်တော့ပဲ အဖုတ်ထဲသို့ လရေများ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ လရေ ထွက်လာသော်လည်း အောင်ခန့် လီးက ကျမသွား ကလျာ အဖုတ်ဝတွင် တစ်စို့စို့ကြီး ဖြစ်နေသည်။
“ခဏဖယ်ဦးကွာ…အထဲမှာ တစ်စို့စို့ကြီးနဲ့ ပူတောင်နေပြီ..”
“အစ်မကလည်း ခုမှ ၁ ခါ ရှိသေးတယ်…”
“ကျမ ရေလေးတော့ သောက်ပါရစေဦးနော်… အမောဆို့ပြီး အသက်ပါသွားလို့ .. ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း ဖြစ်နေဦးမယ်”
ရေသောက်ပြီးတော့ အောင်ခန့်နှင့် ကလျာတို့ မီးကုန်ယမ်းကုန် ပုံစံပေါင်းစုံ လိုးကြလေသည်။ ထိုနေ့က ကလျာလဲ မျော့မျော့ပင်ကျန်သည်။ တခန်းလုံး သုတ်ရည် နှင့် အဖုတ်ရည်တို့က နေရာ အနှံ့ တစ်ရှူးစတို့ကလည်း ဖွေးလို့။ အောင်ခန့် လီးက မထောင်နိုင်တော့အောင် ကြိမ်းနေလေပြီ။ ကလျာအဖုတ်မှာလည်း ဟောင်းလောင်းကြီး ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ရလောက်သည်။ သွေးစ အနည်းငယ်နှင့် အရည်ကြည်တို့က အဖုတ်မှ ပေါင်သို့ပင် စီးကျနေလေပြီ ဖြစ်တော့သည်။
အောင်ခန့်နှင့် လိုးကြီးပြီးသည့် နေ့မှ စပြီး ၁ ပတ်လောက် ကလျာ နားလိုက်ရသည်။ အဖုတ်ထဲမှာလည်း ကြိမ်းနေသည်က တကြောင်းပါသည်။ ထို့ထက်ဆိုးတာက ကလျာတစ်ယောက် ရာသီသွေး ရပ်နေခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အရင်ကလို အောင်ခန့် ဆီ စာသင်သွားလျှင် လိင်ကိစ္စ စိတ်မပါတော့..။ အရင်ကလို အကိုင်မခံ အနှိုက်မခံတော့။
တစ်လကျော်လာတော့ ကလျာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံတော့ ဆီးစစ်ချောင်းလေး ဝယ်ပြီး စစ်ကြည်လိုက်သည်။ လိုင်းလေး ၂ တက်လာသည်။ ကလျာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်လေပြီ။ မိမိသင်နေသော ကျောင်းသားအား မည်သည့်မျက်နှာနှင့် ယူရမလဲ…။
“ဒါဆို ဆရာမလေးက သားကို မသင်ပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့”
“ဟုတ် အန်တီ .. ကျမ လက်ထပ်တော့မှာမို့ပါ..”
“အေး..ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွယ်… သားကတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတော့မှာပဲ…”
“သူက တော်ပြီးသားပါ အန်တီ ဒီအတိုင်းဆက်ကြိုးစားရင် အောင်မှာပါ အန်တီ..”
“အေးပါကွယ်… သာကို နှုတ်ဆက်သွားဦးလေ..”
“မနှုတ်ဆက်တော့ပါဘူး အန်တီရယ်… ကျမ မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စနဲ့ သွားရဦးမှာမို့ပါ..”
အောင်ခန့် အကုန်ကြားသည်။ သို့သော် ကလျာ ဘာလို့ စာဆက်မသင်တော့လဲတော့ မသိ။ သူနဲ့ ဟိုနေ့က နေတာ နည်းနည်းလွန်သွားလို့လား။ ဒါမှမဟုတ်… ငါ့ကို စိတ်ကုန်သွားတာလား….။ ပြတင်းပေါက်မှ ကလျာ နောက်ကျောကို ကြည့်ရင်းသာ ကျန်ခဲ့လေသည်။ အော် အကုန်တတ်အောင် သင်ပေးသွားတဲ့ ဆရာမလေး ကလျာ……။
စားဖိုမှုးကြီးရယ် ကလျာရယ် ဒေါ်မာလာရယ် အောင်ခန့်ရယ် အလွတ်သဘော အလုပ်အကြောင်းပြောရင်း သောက်ရင်းစားရင်းနှင့် အချိန်မှာ သန်းခေါင်ယံသို့ပင် ရောက်လာလေပြီ။ ကလျာကတော့ သိပ်မမူးသေးပေမဲ့ ဒေါ်မာလာကတော့ အတော့်ကို မူးနေလေပြီ ဖြစ်သည်။ အောင်ခန့်နှင့် ကလျာတို့ ဒေါ်မာလာကို တွဲရင်း ကားပေါ်တင်ရသည်။ ကလျာကို တစ်ချက်ပြုံးပြရင်း အောင်ခန့် ကားမောင်းထွက်ခဲ့သည်။
ကားမောင်းလာရင်း ခဏကြာတော့ ဒေါ်မာလာ အမူးလွန်ပြီး ကားထဲတွင် အန်တော့သည်..။ အောင်ခန့် ကားကို အိမ်ရောက်အောင် ဂရုစိုက်မောင်းရင်း ..အိမ်သို့ ရောက်ခဲ့လေသည်။ အိမ်ရောက်တော့ ဒေါ်မာလာ အန်ဖတ်များနှင့် ပေပွလို့… ပါးစပ်ကလည်း ပလုံးပထွေးနှင့် ..ပြောနေသေးသည်။ အောင်ခန့် တွဲရင်း အိပ်ယာပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်..။ ဒီအတိုင်းထားလို့တော့ မဖြစ် ..အန်ထားတာတွေနဲ့ဆိုရင် အအေးပတ်တော့မည်… တော်တော်လည်း နံနေပြီ..။ စကပ်ရော အင်္ကျီပါ လဲပေးရတော့မည့်ကိန်း စိုက်နေလေသည်။
အောင်ခန့် အရက် ထည့်ပြီး ရေခဲရေနှင့် သောက်ချကာ ရဲဆေးတင်လိုက်သည်။ ဒေါ်မာလာကတော့ လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ် ပျက်နေလေပြီ…။ အောင်ခန့် ဘာလုပ်မှာလဲဟု သူ့ကိုယ်သူ အကြိမ်ကြိမ် မေးနေမိသည်။
ဒေါ်မာလာ့ အခန်းထဲ အောင်ခန့် နောက်တစ်ကြိမ် ဝင်လိုက်သည်။ အပေါ်အင်္ကျီချွတ်ရန်ပင် အောင်ခန့် လက်တွေ တုန်နေသည်။ အခုအချိန်ဆို အိမ်ဖော်တွေက အိပ်နေပြီ..။ ခေါင်းစွပ်အင်္ကျီကို အောင်ခန့် အသာပင့်လိုက်သည်။ ဗိုက်သား ဖွေးဖွေးတို့က နိမ့်ချီ မြင့်ချီ ..အဆီပိုဆိုလို့မရှိ… ပန်းမြတ်ထက်ပင် လှနေသော ဗိုက်သား အထိအတွေ့ကလည်း နူးညံ့လှသည်။
အောင်ခန့် ချွေးတွေစို့လာသည်။ တခါမှ မလိုးဖူးသော ယောကျ်ားတစ်ယောက်၏ ရင်ခုန်မှုမျိုး..။ ဆက်ပြီး အင်္ကျီကို မတင်လိုက်သည်။ ဇာဘော်လီ နို့နှစ်ရောင်လေးက တင်းပြီးလုံးနေသော နို့ ၂ လုံးကို မနိုင်မနင်း ထိန်းထားရလေသည်။ အပေါ်သို့ မောက်ပြီး စေ့တင်းနေသော ကြောင့် နို့ ၂ လုံး အလယ်က အမြောင်းလေးပင် ထင်ထင်ရှားရှား..။ အပေါ်အင်္ကျီ ချွတ်ပြီးတော့ သေချာကြည့်လိုက်တော့ ဇာဘော်လီမှာပါ စိုသယောင်ယောင် ဖြစ်နေသောကြောင့် အောင်ခန့် ဇာဘော်လီပေါ်ကို လက်လေးနှင့် တင်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးက စိုနေသော ဇာဘော်လီပင် ခြောက်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေလေပြီ။
အောင်ခန့် စိတ်ကို ပြန်ထိန်းရင်း သိုင်းဖတ်ကာ ကျောမှ ဘော်လီချိတ်ကို ဖြုတ်လိုက်သည်။ အောင်ခန့် ရင်ဘတ်မာမာထဲသို့ ဒေါ်မာလာ့ နို့ ၂ လုံး ပြားဝင်သွားလေသည်။ ဒေါ်မာလာ အသက်ရှူသည့် လေကြောင်းက အောင်ခန့် နားထင်သို့ တိုးနေလေသည်။ အောင်ခန့် ချွေးများ သီးနေအောင် ကျလာသည်။ ချိတ်ဖြုတ်ပြီးသော ဘော်လီကို ဖယ်ရန် အောင်ခန့် မဝံမရဲ ရှိလှသည်။ မချွတ်ခင်က အမြောင်းလေး ပေါ်နေသော နို့သည် အခုတော့ ခပ်လျော့လျော့လေး…။ ဇာဘော်လီလေးကို လက်တုန်တုန်ဖြင့် ဖယ်လိုက်သည်…။ အောင်ခန့် ရင်တစ်ခုလုံး ငလျင်အကြမ်းစား လှုပ်သလို တုန်ခါသွားသည်။
ကလေးအမေ နို့သီးခေါင်းဟု ဆိုသော်လည်း မဲမနေ… အညိုရောင်နုနု နှင့် ပန်းရောင်နုနု ရောထွေးထားသော အရောင်မျိုး….။ လုံးနေသော်လည်း ဘေးသို့ တွဲမကျ။ ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် ပုံမပျက် တည်နေသော အနေအထားမျိုး…။ နို့လုံးမှာ သွေးကြောစိမ်းများ အချို့ သွေးကြောနီများက တချို့… အသားဖြူသူမို့ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် လှနေသည်။ ပက်လက် အနေအတား ဖြစ်သောကြောင့် ၁၈ နှစ်သမီး နို့အရွယ် ဖောင်းသယောင်ယောင်… ဖုသယောင်ယောင်..။ နို့သီးခေါင်းလေးက အထဲဝင်နေသေးသည်။
အောင်ခန့် မနေနိုင်တော့ပဲ .. လက်၂ ဖက်ဖြင့် အသာလေး ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြောမပြတတ်အောင် အိစက်ညှက်ညောသော အထိအတွေ့ …။ နို့ သီးခေါင်းလေးကို ကုန်းစုတ်မိတော့လည်း…. ညိုနုနုအရောင်လေး ပျောက်ပြီး ပန်းရောင်သန်းလာသော နို့လေး….။ အောင်ခန့် စကပ်ကို ထပ်ချွတ်ဖို့ အားမရှိတော့ ။ လက်တဘက်က နို့ကိုကိုင်…. ပါးစပ်က နို့စို့ရင်း ကျန်လက်တဘက်က ပြောင်တင်ပြီး ကြီးနေသော လီးကို အထက်အောက်ဆော့ရင်း… ကိုယ်သင်းနံ … ပြီးတော့ သွေးကြောစိမ်းနီတို့ ဖြန့်ကျက်ထားသည့် ရင်အုံ….. ပြီးတော့ ထောင်ပြီး ဖုဖုလေးဖြစ်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်း.. ပြီးတော့ နူးညံတဲ့ အထိအတွေ့ .. ပြီးတော့ … ပြီးတော့…. အောင်ခန့် … သုတ်ပူပူတို့ ဒေါ်မာလာ ဗိုက်သားဖွေးဖွေးပေါ်.. အရှိန်နှင့် ပန်းထွက်သွားသည့် အခိုက်အတန်…..။
ဒေါ်မာလာ မျက်လုံးဖွင့်ဖွင့်ချင်း သိလိုက်တာက ခေါင်းကိုင်သည့် ဝေဒနာ ဖြစ်လေသည်။ မနေ့ညက အသောက်များသွားတာ ဖြစ်နိုင်သည်။ အင်္ကျီကြည့်တော့ ညဝတ်အင်္ကျီ…..။ ပြန်တွေးကြည့်သည်။ ညက သောက်တာစားတာပဲ မှတ်မိသည်။ ဘယ်လို ဒီရောက်လာတာလဲ… ဒီအကျီကရော ဘယ်သူ လဲပေးတာလဲ…။ ဆက်တွေးနေလဲ ပေါ်မှာ မဟုတ်.. ဆက်မတွေးတာပဲ ကောင်းပါတယ် ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်လိုက်သည်။
ရေချိးခန်းလိပ်ကာဆွဲကာ ရေချိုးရန် ညဝတ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ရာ ….
တကိုယ်လုံး ဘာမှ မရှိတော့….. မိမိကိုယ်တိုင်ဝတ်လျှင် ဘော်လီနှင့် အောက်ခံဘောင်းဘီ ချွတ်လေ့မရှိ….။ အခုဟာက တကိုယ်လုံး မိမွေးတိုင်း ဖြစ်နေသည်..။ ဗိုက်မှာလည်း တစ်ခုခု ပေနေသလိုကြီး ဖြစ်နေသည်။ နှပ်ချေးပေနေသလိုလို ပိုက်ဆက်ကော်ပေသလိုလို.. အသားပတ်သလိုလို…။ ပြန်စဉ်းစားကြည်လျှင် အောင်ခန့် နှင့် ပြန်လာရမည်…။ ကလျာက လဲပေးတာလဲ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်…. မှန်ထဲတွင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်သည်…။ နို့သီးခေါင်း တဖက် ပန်းရောင်သန်းနေသည်။ စိတ်ကြောင့်ထင်တာပဲဟု ထင်လိုက်သည်။
သို့သော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံ… ပိပိလေးကို ကိုင်ကြည့်သည်… နာတာမျိုး မရှိပေမဲ့ ထူးထူးခြားခြား စောက်ရည်များ ထွက်နေသည်….။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံသော်လည်း အေးမြသည့် ရေပန်း၏ အထိအတွေ့ကြောင့် နည်းနည်းတော့ လန်းသွားသည်။ ရေချိုးခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး အင်္ကျီလဲကာ မနက်စာ စားရန် ထွက်ခဲ့သည်။
“ဟုတ် ပြောပါ ကြီးကြီး..”
“ငါ ညက ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ကို နင်သိလား…”
“နှင်းပွင့်လေးရော… ဒေါ်နုရော နင်အိပ်တဲ့အချိန် အိပ်တာလား..”
“မဟုတ်ဘူး ကြီးကြီး သူတို့က အရင်အိပ်တာပါ.. ကျမက နောက်ဆုံး အိပ်တာပါ..”
မာလာတစ်ယောက် အိမ်ဖော်တွေမေးပြီး အနည်းငယ်တော့ တုန်လှုပ်သွားသည်။ ဒါဆို ညက… ညက… အဝတ်လဲပေးတာ.. ကလျာပဲ နေမှာပါလေ.. ဖုန်းဆက်ကြည့်ဦးမှ…။
“အမေ..နိုးပြီလား ကျနော် အလုပ်သွားတော့မလို့…”
မာလာ့မျက်နှာ ရေနွေးပူနဲ့ ပက်ခံရသလို ပူကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော် မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု စိတ်တင်းကာ မူမပျက် ပြန်ပြောလိုက်သည်။
အောင်ခန့် လက်ပြရင်း ထွက်သွားလေသည်။ မာလာလဲ လက်ပြန်ပြရင်း… မဟုတ်သေးပါဘူးဟုတွေးကာ.. လက်ပြန်ရုတ်လိုက်သည်..။ အရင်ကဆို အေး…အေး.. ဟုသာ ပြောမိသော်လည်း အခု ကားကို ဂရုစိုက်မောင်းဟု ပါစပ်က လွတ်ကနဲ ထွက်သွားလေသည်။ ပြီးတော့ ပြုံးပြီး လက်ပြန်ပြမိသေးသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘာဖြစ်မှန်း မသိတော့။ ဘာပဲပြောပြော ကလျာ့ဆီတော့ ဖုန်းဆက်ကြည့်မှပါဟု အတွေးပေါက်လိုက်သည်။
“အင်း ပြောလေ မမာလာ..”
“ညက ဒို့ သိပ်မူးသွားလို့ မနှုတ်ဆက်လိုက်ရလို့..”
“ဒါနဲ့ ညက ကလျာ ဘယ်အချိန် ပြန်ဖြစ်လဲ..”
“ညက တို့လဲမူးနေလို့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာပဲ အိပ်ဖြစ်တယ် ၁၂ လောက် ထင်တာပဲ..”
“ကလျာ အခု ဘယ်မှာလဲ…”
“မမာလာတို့ဆိုင်မှာ ရောက်နေပြီလေ… စားဖိုဆောင် နဲနဲစစ်ရအောင်”
ဟုဆိုကာ ဖုန်းချလိုက်လေသည်။ မာလာတစ်ယောက် ဖုန်းချလိုက်ပြီ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့တော့သည်။ ကိုယ်ဟာ့ကိုယ် မလုံတာလား…. ဖီးပဲတက်လာတာလား… ရင်ပဲခုန်လာတာလား … ရှက်ပဲရှက်လာတာလား မဝေခွဲတတ်တော့….။ သေချာတာကတော့ ယောကျ်ားတစ်ယောက် ထိတွေ့ခွင့်ကို အခုအချိန် လိုချင်မိသည်။ တစ်ခုခုကို လုပ်ပြီး ထပ်လုပ်ချင်သလို ယောကျ်ားတစ်ယောက်နဲ့ ထိတွေ့ပြီး ထပ်ထိတွေ့ခံချင်သလိုမျိုး။ ခေါင်းနဲနဲ ကိုက်တာကြောင့် မနက်စာစားပြီး အိပ်ခန်းထဲသို့ ဒေါ်မာလာ ပြန်လှဲနေတော့သည် မဟုတ်ပါလား…။
အောင်ခန့်နှင့် ကလျာတို့ အစည်းအဝေးခန်းထဲတွင် ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေလေသည်။ စာရွက်လှန်ကြည့်သော အသံမှအပ မည်သည့်အသံမှ မထွက်။ အောင်ခန့်ကတော့ စာရွက်တွေကြည့်လိုက် ကလျာ့ကိုကြည့်လိုက်နှင့် လုပ်နေသည်။ ကလျာကတော့ စာရွက်ကိုသာ ဂရုစိုက်ကြည့်နေသည်။
အော် ကလျာ… ကလျာ.. အရင်က ဖျက်လတ်ပြီး ဆက်စီကျသော အလှအပကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး အခုတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ကျက်သရေနဲ့ အလှတို့ ပိုင်ဆိုင်နေပါလားဟု အောင်ခန့်တွေးရင်း ပြုံးလိုက်မိသည်။ အောင်ခန့်ပြုံးနေချိန် ကလျာအကြည့်နှင့် ဆုံသွားလေသည်။
“မင်း အကျင့်တွေ မပျောက်သေးဘူးပဲကွ”
အောင်ခန့် သူခိုးလူမိသလို ယောင်အအ နှင့်
“မင်းရဲ့ အူကြောင်ကြောင် အကျင့်လဲ ကျန်နေသေးတာကိုး..”
“ဟုတ်တယ် အစ်မ ကျနော်ကို အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်အောင် အစ်မ လုပ်သွားခဲ့တာလေ ..”
“မင်းဘာပြောတယ်…. အေးပါ… မင်းမသိတာတွေက များခဲ့တာကိုး..”
ကလျာ ပြောရင်း မျက်ရည်လေး ဝဲလာသည်။
“ကျနော် အကုန်သိတယ်.. ကျနော့်ကို လိုသုံး အစားထိုးခဲ့တာတွေ အကုန်သိတယ်… အစ်မက ကျနော့်ကို အစ်မ ချစ်သူနေရာမှာ အစားထိုးပြီး … နောက်ဆုံးတော့ ကျနော့်ကို ပစ်သွားခဲ့တာလေ…”
“ဘာ!!!!!…. မင်း… မင်း.. စော်ကားလွန်းနေပြီနော်… မင်းကြောင့် ငါ့ဘဝ ပြောင်းလဲခဲ့တာ မင်းဘာသိလဲ…”
“ဆောတီးပါ အစ်မ… ကျနော် လွန်သွားတယ်…. ကျနော် မသိတဲ့ အကြောင်းတွေ သိခွင့်ရမလားဟင်”
ဟုဆိုကာ ကလျာ ကျနေသော မျက်ရည်ကို သုတ်ရင်း…….။ ကလျာတစ်ယောက် ချစ်သူနှင့်လည်း အဆင်မပြေ ဒီကြားထဲ မိမိသင်သော ကျောင်းသားနှင့် ဗိုက်ကြီးပြီဆိုတော့ …. ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့သာ ရှိတော့သည်။ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် ကန်ဘောင်သို့ တစ်ယောက်တည်း လျှောက်လာခဲ့လေသည်။ ကန်ဘောင်တွင် ထိုင်လိုက်သည်က ည အချိန်မတော်သို့ပင် ရောက်ခဲ့လေသည်။ ကန်ဘောင်က ပြန်လာတော့ ည ၁၁ နာရီသို့ပင် ထိုးတော့မည်။ ကလျာနေသော လမ်းက လူခြေပျက်သည်။
ထိုစဉ် အသက်ကြီးပိုင်း လူကြီးတစ်ဦး လမ်းတွင် လဲနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကလျာအနေနဲ့ ထို လူကြီးကို ဆေးရုံပို့ပေးလိုက်သည်။ ဆေးရုံရောက်တော့ ရင်ကြပ်သော ရောဂါရှိသောကြောင့် အသက်ရှူရန် ခက်ခဲသော ရောဂါဟု သိရသည်။ ထို လူကြီး ပြန်သတိရလာတော့ ကလျာ့ကို တွေ့တွေ့ချင်း ချစ်မိသွားသည်။ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာကာ.. ဆေးရုံကို လာခိုင်းသည်။ ထိုလူကြီး၏ သမီးများက မကျေနပ်ကြပေ။ မကျေနပ်သည့် အလျောက်… ဆေးရုံလှေကားမှ တွန်းချခံရသည်။ ကလျာကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ ဗိုက်ထဲက ကလေးကတော့ လူလောကတွင် မရှိတော့…။
ပြောလက်စ စကားကို ရပ်လိုက်ပြီး ဝီစကီပြင်းပြင်း တစ်ခွက်ကို မော့ချလိုက်သည်။ ဆက်ပြီး
“အေး.. အခုလည်း ငါက အဲဒီအိမ်မှာ အိမ်ဖော်သာသာပဲ…”
ဟု ဆိုကာ မျက်ရည် သုတ်လိုက်သည်။
“ကျနော် တကယ် မသိလိုက်လို့ပါ မရယ်… ကျနော် မကို လိုက်ရှာပါသေးတယ်… ရှာမတွေ့ခဲဘူး… မ တော်တော် အပုန်းကောင်းတယ်..”
“ပုန်းတာ မဟုတ်ဘူး အောင်ခန့် မင်းကို စိတ်နာလို့…. မုန်းလို့..”
“မ… မုန်းလဲ ကျနော် မကို အခုထိ တမ်းတနေတုန်းပဲ…”
အောင်ခန့် ထိုင်ရာမှထပြီး ကလျာ့ကို တင်းတင်း ဖက်လိုက်လေသည်။
“ငါ မင်းကို သိပ်မုန်းတယ်… သိပ်မုန်းတယ်…”
ဟု ဆိုသော်လည်း အောင်ခန့်ရင်ခွင်ထဲ နှစ်ဝင်နေသော ကလျာတစ်ယောက် ရုန်းကန်ခြင်း မပြုပဲ… ရှိုက်ကြီးတငင်သာ ငိုနေတော့သည်။
အောင်ခန့် တစ်ယောက် ကလျာ့ကို ထွေးပိုက်ရင်းငုတ်အကြည့် ကလျာက မျက်ရည်များနှင့် မော့ အကြည့် ..အကြည့်ချင်းဆုံကာ အနမ်းမိုးများ ရွာမိတော့လေသည်။ အရင်တုန်းကလို နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက နွေးထွေးနေဆဲ..။ ဆယ်ကျော်သက် မဟုတ်တော့တဲ့ အောင်ခန့် ရင်ခွင်ကလည်း ကျယ်ပြန့်ခိုင်မာနေပြီ…။ အသက် ၃၅ ဝန်းကျင် ကလျာ့ အလှကလည်း ရင့်ကျက်နေပြီ..။
အတွေ့အကြုံအရ အောင်ခန့် အထိအတွေ့က နူးညံ့နေပြီ…။ ကလျာ့ မီနီစကပ်ပေါ်သို့ အောင်ခန့် လက် နှစ်ဖက် ညှင်သာစွာ လှုပ်ရှားနေပြီ။ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နမ်းနေရာမှ ပါးစပ်များ ပွင့်လာပြီး လျှာချင်း ပွတ်သပ်နေလေပြီ။ အချစ်ဒီဂရီတို့ ဒီရေအလား တဆင့်ထက်တဆင့် မြင့်တတ်နေလေပြီ။ အချစ်နှင့် ကင်းကွာနေသော လူနှစ်ယောက်အဖို့ ကာမ ရမ္မက်က မိုးထိမြင့်တတ်နေပြီ။
အောင်ခန့် စကပ်ကို ပွတ်ရင်း လှန်တင်လိုက်သည်။ ဇာပွင့် အနားနှင့် အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ အောင်ခန့် ကိုယ်လုံးက နိမ့်ဆင်းရင်း ဒူထောက်လိုက်သည်။ အမွေးအမျှင် အနံအသက်ကင်းလှသော အက်ကြောင်းလေးပေါ်သို့ လျှာဖျားလေး ထည့်လိုက်သည်။ ကလျာတစ်ယောက် ဓါတ်လိုက်သလို တကိုယ်လုံး တုန်းတတ်သွားသည်။ မတ်တပ်ပင် မရပ်နိုင်တော့ပဲ ထိုင်ခုံ ပေါ်သို့ ဖင်လေး တင်ပြီး ကားလိုက်မိသည်။ ပေါင်နှစ်လုံး ကားသော်လည်း ပြဲမနေပဲ စိစိလေးဖြစ်နေသော ပိပိ လေးကို အောင်ခန့် လက်ကလေးနှင့် အသာ ဖြဲရင်း.. စောက်စိရှိသော နေရာသို့ လျှာဖျားလေးနှင့် တို့လိုက်သည် ..။ ကလျာတစ်ယောက် တုန်တက်သည်အထိ အရသာ ရှိလှသည်။
“ဒီမှာ အမဲသားကင်ထားတာ ရပါပြီ သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး “
ရုတ်တရက် စာဖိုမှူးကြီး ဝင်လာသောကြောင့် ကလျာ ပေါင် ၂ ဖက် စေ့လိုက်သည်။ သို့သော် အောင်ခန့် ခေါင်းက ခံနေသောကြောင့် စိမရ။ အောင်ခန့် စားပွဲအောက်တွင် အသာလေး နေရသည်။
“အော်…အေး ထားခဲ့လေ..အစ်မ မြည်းလိုက်ဦးမယ် လိုအပ်တာ ပြောတာပေါ့..”
“ဟုတ် အမဲသားက သိပ်မလတ်သလို ဖြစ်နေတော့ ကျနော်တို့ မလတ်တဲ့ အတိုင်းပဲ သံပုရာသီး ညှစ်ပြီးတော့ “
ကလျာပါးစပ်မှ အ.. ဟု ထွက်သွားလေသည်။ မထွက်ပဲလည်း မနေနိုင်။ အောက်မှ အောင်ခန့် ပေါင်အနည်းငယ်ဟပြီး လက်ခလယ်နှင့် ထိုးထည့်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
“အေးလို့ ပြောတာ…အင်း.. ဆက်ပြော.. အင်.. အင်း”
ညီးသံမှန်းမသိ အင်း ပြောမှန်းမသိ.. အောင်ခန့်ကလည်း အောက်မှာနေပြီး လက်ခလယ်ကို အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေသောကြောင့် ရုပ်တည်ကြီးနှင့် နေပေမဲ့ ခိုးပြီး ဖီးတက်ရသောကြောင့် ကလျာ့အနေနဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်ပင်….။ စားဖိုမှူးကြီးကလည်း တော်တော်နှင့် စကားမပျက်… ဖြစ်ပျက်ပုံ အသေးစိတ်ကို ရှင်းပြနေသေးသည်။
အောက်က အောင်ခန့်ကလည်း သွင်းထားသော လက်ခလယ်၏ ထိပ်ပိုင်းကို ကွေးပြီး စောက်ခေါင်း နံရံကို ကလိနေသောကြောင့် ကလျာတစ်ယောက် ပြီးချင်သလိုလို ပင် ဖြစ်နေလေသည်။ ပိပိကို လက်နှင့် အသွင်း အထွက် များသောကြောင့် ပိပိရည်များနှင့် ချောမွေ့လာလေသည်။ ကလျာကလည်း စောက်ဖုတ်ကြွက်သားများနှင့် ညှစ်ထားသော်လည်း ညှစ်လေလေ ဖီးတက်လေလေ ဖြစ်နေတော့သည်။ စားဖိုမှူးကြီးက ပြောဆိုပြီး ထွက်သွားတော့မှ…
“မင်း အခုချိန်ထိ ဆိုးနေတုန်းပဲ အောင်ခန့်ရယ်…”
“မကို အရသာ အသစ်လေး ပေးချင်လို့ပါ..”
ပြောရင်းနှင့် စားပွဲအောက်မှ ထွက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီ ချွတ်လိုက်ရာ အောင်ခန့် လီးကြီး ငေါက်ခနဲ ထွက်လာလေသည်။
“ကြီးမှာပေါ့ မရယ် ကလေးမှ မဟုတ်တော့တာ…”
“ကြောက်တောင်လာပြီ… ဖြည်းဖြည်းနော် .. ကွဲသွားလိမ့်မယ်..”
ပြောနေရင်းပင် စားပွဲပေါ်တွင် ကလျာ့ ကိုယ်တဝက်ကို ဆွဲမှောက်လိုက်သည်။ ပြူထွက်နေသော ပိပိ နှုတ်ခမ်းသား ၂ ခုက ဖောင်းထွက်နေလေပြီ…။ စိနေသော နှုတ်ခမ်းသားများ အရည်များနှင့် ပြောင်တင်းနေလေသည်။ အောင်ခန့် ကွဲနေသော အမြောင်းလေး တလျှောက် လီးနှင့် ပွတ်တိုက်လိုက်သည်။ ပွတ်လိုက်သည့် လီးက ပိပိ နှုတ်ခမ်းသားအသေးနှင့် အစိကို ခလုပ်တိုက်သဖြင့် ကလျာ ဖင်လေး ကော့လာလေပြီ…။ အပေါက်ဟု ထင်သော နေရာသို့ အောင်ခန့် ထိုးသွင်းလိုက်ရာ ချော်ပြီး စောက်စိကို ထိုးမိလေသည်။
“အို…ဟင့် …ဟင့်…အခုထိ အပေါက်အတန်း မတည့်သေးဘူးကွာ….”
အားမလို အားမရသံနှင့် ကလျာ ပြောလေသည်။ အောင်ခန့် ဘာမှ မပြောပဲ ပိပိကို အသာတေ့ပြီး စထိုးထည့်လိုက်သည်။
အောင်ခန့် လီး၏ အဖျားပိုင်း ကွမ်းသီးခေါင်း နေရာထိပင် ထည့်ရသေးသည်…. ပိပိက တော်တော်ပင် ကျဉ်းနေသည်ဟု ခံစားရသည်..။ အောင်ခန့် လီးကို ဒီအတိုင်းထားပြီး ကလျာ့ ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ ထိုမှတဆင့် အရှေ့ဘက်ကို လက်လျှောကာ နို့ကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်….။ အင်္ကျီပေါ်မှာပင် ကိုင်ရလို့လားမသိ နို့တွေက တင်းတင်းရင်းရင်းပင် ရှိသေး၏..။
“မ … မလုပ်ရတာ ကြာပြီထင်တယ်… အပျိုလေး အတိုင်းပဲ..”
“မ အမျိုးသားက မလုပ်ဘူးလား…”
“သူက အသက်ကြီးပြီ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ…”
“ဒါဆို မ အလုပ်မခံရတာ ကြာပြီပေါ့”
“ အင်း ၅ နှစ်လောက်ရှိပြီ..”
“ကျနော့် ဟာနဲ့ဆို ဘယ်သူ ပိုကြီးလဲ..”
အောင်ခန့် စကားပြောနေရင်း ရုတ်တရက် တဆုံး ဆောင့်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ လီးတစ်ခုလုံး လက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသလိုမျိုး ပိပိ အတွင်းသားကြွက်သားတို့ ဆွဲညှစ်ခံရတော့သည်။
“နာသွားလား မ ..”
မလှုပ်နဲ့ဦးသာ ပြောနေတာ ဖင်က လှုပ်ပြီး ကောက်တက်နေပြီ။ အောင်ခန့် လီးကို တဖြည်းဖြည်း ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ပိပိ နှုတ်ခမ်းသားတို့က ဖောင်းပြီး ကပ်ပါလာသည်။ ပြန်ထိုးထည့်လိုက်သော အချိန်တွင် ဖောင်နေသော အသားတို့ ပြန်နှစ်ဝင်သွားပြန်သည်။ ညီးသံ သဲ့သဲ့လေး ထွက်ကာ သူမ ဖီးတက်နေကြောင်း ဖော်ပြနေသလိုပင်..။
အချက် ၅၀ လောက် ဆောင့်ပြီးတော့ လီးတွင် စောက်ရည် ဖြူဖြူတို့ ကပ်ပါလာလေပြီ။ အောင်ခန့် ဆောင့်ရတာ အားမရတော့ပဲ…. ခြေတဘက် စားပွဲပေါ် တင်လိုက်သည်။ ပိပိကို ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးတစ်ယောက် နွားနို့သောက်ပြီး မလိုင်ဖတ်တို့ ပါးစပ်တွင် ကပ်နေသလို ပိပိ နှုတ်ခမ်းသားတွင် ပိပိနံ့သင်းသင်း စောက်ရည်တို့ အဝိုင်းလိုက် ကပ်နေတော့သည်။ အချိန်ကြာကြာပင် မဆောင့်လိုက်ရပဲ အောင်ခန့်တစ်ယောက် လရည်များ ကလျာ၏ သားအိမ်ဝသို့ အရှိန်ပြင်းပြင်း ထိမှန်သွားပြီ မဟုတ်ပါလား။
“ ချစ်လို့တောင် မဝသေးဘူးကွာ..”
“အို..အောင်ခန့်နော်… နောက်မှပေါ့လို့ ဘယ်မှ ထွက်မပြေးတော့ပါဘူးကွ..”
“ဒါဆို မနက်ဖြန်ည ထပ်ဆုံချင်တယ်ကွာ…”
“မင်းကလည်း ..အခုချိန်ထိ ဇွတ်ကြီးပါလား…”
အောင်ခန့် ဘောင်းဘီဝတ်နေရင်း စကားပြောနေတာ ဖြစ်သည်။ ဘောင်းဘီဝတ်ပြီးတော့ ကလျာ အောက်ခံဇာဘောင်းဘီလေး ကောက်နမ်းလိုက်သည်။
“မညစ်ပတ်ပါဘူး မရဲ့ အခုမှ မရဲ့ ပိပိနံလေး ပြန်ခံစားနေတာပါ…”
“ကျနော့်ကို အမှတ်တရ ပေးပါလားဟင်…”
“ကျမ ဖင်ပြောင်နဲ့ ပြန်ရတော့မှာပေါ့…”
“ဟား…ဟား..ပြန်ပေါ့ မရဲ့ ဘယ်သူသိတာကျနေတာပဲ…”
ပြောဆို အချစ်တင်းနှောနေကြတာကို အပြင်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ တီးလုံးသံကြောင့် မကြားတာလား။ တရှဲရှဲကြော်နေသော စားဖိုဆောင် သံကြောင့် မကြားရတာလား မခွဲတတ်တော့ပေ။
ညနေခင်း၏ အမှောင်က ပိတ်ပိတ်မှောင်နေသော်လည်း အခန်းငယ် တစ်ခုထဲ၏ အလင်းကတော့ လူ၂ ဦးအတွက်တော့ အလင်းရောင် လုံလောက်နေသည်။ သူခိုးမီး သို့မဟုတ် ညအိပ်မီး ပြာပြာ စိမ်းစိမ်း ဝါဝါ တို့က ဟိုနား တကွက် ဒီနာ တကွက် ထွန်းလင်းတောက်ပလို့ နေပေသည်။ ထို အခန်းငယ်ထဲတွင် ဝီစကီ အဖုံးဖွင့် တစ်လုံး ၊ သောက်လက်စ အရက် ခွက် ၂ ခွက်… ရေခဲ ပန်းကန်နှင့် ရေခဲတို့က အေးမြလို့ …။ အဲကွန်းလေမှ အအေးဆုံးသော လေများ တဝူးဝူး မှုတ်ထုတ်လို့….။ သို့သော် အဝတ်နက္ထိ လူ ၂ ဦးကတော့ မအေးနိုင်…. သူရမ္မက်ဇောနှင့် သူတို့…။
ထိုအချိန်နှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လမ်းမီးလုံးတို့က ပတ္တမြားတို့ စီထားသလို အမဲရောင်ရင့်ရင့် ကတ္တရာလမ်းပေါ်တွင် ပြေးနေသော အပြာနုနု ကားလေးပေါ်က ဖွင့်ထားသော FM လိုင်းတစ်ခု… စီးကရက် အငွေ့တထောင်းထောင်းကို ညှပ်ထားသော လက်သည်းနီ အစိမ်းနုရောင်လေးနှင့် သေးသွယ်သော လက်တစုံ ကားတံခါးဝမှာထုတ်… အတွေးပေါင်းစုံနှင့် ဒေါ်မာလာ…။
အောင်ခန့်နှင့် မာလာ စကား မပြောဖြစ်တာလည်း ၁ ပတ်..။ ထူးထူးခြားခြား တတ်တတ်ကြွကြွ အိမ်ပြန်နောက်ကျသည့် ဒီ ၁ ပတ်။ ညည သီချင်သံ အေးအေး လေတချွန်ချွန်နဲ့ ပျော်ပျော်မြူးမြူး တော်တော်ထူးတဲ့ ဒီ ၁ ပတ်။ သူငယ်ချင်း ခပ်ရင်းရင်း ဖုန်းပင် မဆက် ဒီ ၁ ပတ်။ ဆက်ဆံရေးတွေ ခပ်အေးအေး ရာသီလည်း အေးတဲ့ ဒီ ၁ ပတ်။ ဒီ ၁ ပတ် အကြောင်းဆက်လို့ တွေးလာတဲ့ ဒေါ်မာလာ….။
ဝီစကီ အရှိန်ကြောင့်လား ရမ္မက် အပူကြောင့်လား မသိ.. နှာခေါင်းမှ လေပူတို့ တစ်ဦး၏ပါးကို တစ်ဦး မှုတ်ထုတ်နေသည်။ စားပွဲပေါ်တွင် ပတ်လက်အနေအထား။ ကလျာ့… ခြေထောက် ၂ ဖက်က မိုးပေါ်ထောင်လို့ တစ်တစ်တူး ပုံစံဆိုလား ဘာလား ကလျာ မသိ။ အောင်ခန့်လီးက ကလျာ့ ပိပိ ဖောင်းဖောင်းတွင် ထိုးလျက်သား…။
အောင်ခန့် ဒီလိုရက်မျိုး မရှိခဲ့တာ ၂ နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီ…။ တိတိကျကျပြောရရင် သမီးလေး အသက်အတိုင်း …. လာမဲ့ ရက်ပိုင်အတွင်း သမီးလေး ၂ နှစ်ပြည့်တော့မည်။ ကလျာ့ပိပိထဲ ပြည့်သိပ်နေသလို ခံစားနေရသည်။ အောင်ခန့်လီးကြီးကလည်း အရင်ကထက် ကြီးလာတာလည်း ပါမည်။ အဝင်အထွက်တိုင်း ပိပိ အတွင်းသားများမှ ဆွဲညှစ်စုပ်ယူထားသည်။ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ပုံစံမျိုးနှင့် ညိမ့်ညိမ့်ညောင်းညောင်း လိုးနေခြင်းပင်။
ရေငတ်လာရင် ဝီစကီလေးမော့လိုက် အရသာခံပြီ ဆောင့်လိုက် မူးလာတော့ မပြီးနိုင်။ ကလျာ့ စောက်ခေါင်းများပင် ပွတ်တိုက်မှုတို့ကြောင့် ပူနေလေပြီ။ စောက်ရည်တို့က စားပွဲပေါ်တွင် ဟိုတကွတ် ဒီတကွက်…။ အောင်ခန့်ကတော့ ပြီးချင်တဲ့ စိတ်မရှိသေးပေ.. တစ်ညလုံး ဇိမ်ခံလိုးမည်ဟု ကြံစည်ထားလေသည်။ ကလျာကတော့ အကြိမ်ကြိမ်ပင် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်နေလေသည်။ အစွန်းစွန်ဆုံး ပိပိတို့က အရည်ပင် မထွက်နိုင်တော့ .. ခပ်ခြောက်ခြောက်ပင် ဖြစ်နေလေပြီ။
ကလျာ ပိပိ နာလှပြီဖြစ်သဖြင့် ပိပိအဝနှင့် စောက်ခေါင်းထဲ ဂျယ်ထည့်ရန် အောင်ခန့်အား ပြောရလေတော့သည်။
“မောင်..ကလျာ မခံနိုင်တော့ဘူးကွာ… ပြီးလိုက်တော့နော်..”
“မကလည်းကွာ ဒီမှာ ဝတောင် မဝသေးဘူး”
“မဝသေးလဲ ခဏတော့ နားပါဦး မောင်ရယ်… အထဲမှာ ကျိမ်းစပ်နေပြီ…”
“နားမယ်ဆိုရင်တော့ ခဏပဲရမယ်နော်… တစ်ညလုံး နေမှာ.. ဒီညတော့..”
“အင်းပါ ..ဒီမှာ ဘာမှ မထွက်နိုင်တော့လို့ .. အကူအရည်လေး သုံးရတော့မယ်..”
“လာ..မ… ကျနော်.. ထည့်ပေးမယ်လေ..”
မကဲနဲ့ဟု ပါးစပ်ကသာ ပြောနေတာ… စားပွဲပေါ်တွင် ပေါင်ကားထားပြီးနေပြီ။ အောင်ခန့် ဂျယ်ဗူးထဲမှ ခပ်ပျစ်ပျစ် ကြည်ကြည် အရည်တို့ လက်ဖဝါးနှင့် လက်ခလယ်ထိပ်တို့တွင်တင်ပြီး ပိပိ အဝကို ကျန်လက်တဘက်နှင့် ဖြဲပြီး ဂျယ်ပါသော လက်ခလယ်ကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ချောချောမွေ့မွေ့ ဝင်သွားသော လက်ချောင်းကြောင့် ကလျာ တစ်ယောက် ခေါင်းမော့တက်သွားလေသည်။ လက်ဖနောင့်နှင့် စောက်စိကို ဖိပြီး ပွတ်လိုက်သောအခါ ကလျာတစ်ယောက် အရှင်လတ်လတ် နတ်ပြည်ရောက်သွားသည်။
ဒေါ်မာလာတစ်ယောက် မိမိဆိုင်သို့ အခြေအနေ တစ်ခုခု သိလိုသိညား ဝင်ကြည့်လိုက်သည်။ ညအိပ်မီးများသာ လင်းနေပြီး ဆိုင်တံခါးလဲ စေ့ရုံသာစေ့ထားလေသည်။ တံခါးတွန်းဖွင့်လိုက်တော့ ဆိုင်းအတွင်း လူမရှိ တိတ်ဆိတ်လို့….။ မီးဖိုခန်း သွားကြည့်သည်.. အိုးခွက်တို့က သူနေရာနှင့်သူ..။
ထူးဆန်းနေတာက တံခါး သော့မခတ်ရသေးတာရယ်.. ညအိပ်မီး ပွင့်နေတာရယ်……။ ရုတ်တရတ်ဆိုသလို နားနေခန်းသို့ လှည့်ကြည့်မိတော့…. နားနေခန်းတည်ဆောက်ပုံက နေ့ခင်းပိုင်းဆို အတွင်းသို့ ဖောက်ပြီး မမြင်ရသော မှန် အမျိုးအစား..။ ညဘက်ဆိုရင် ပြောင်းပြန် အခန်းထဲမှ အပြင်သို့ ပြန်မမြင်ရပေ..။ သို့သော် အပြင်က ကြည့်ရင်တော့ ထင်ထင်ရှားရှား..။
ဘယ်လောက်တောင် ထင်ရှားသလဲဆိုရင် ကလျာ အဝတ်မဲ့ ခန္ဒာကိုယ် ကားထားသော ပေါင်….။ အောင်ခန့်ရဲ့ တုတ်ခိုင်လှသော အချောင်းကြီး..။ စည်းချက်ညီတဲ့ ဆောင့်ချက်….။ ဖီးအပြည့်နဲ့ ကလျာ့မျက်နှာ…။ ပြီးတော့ မော့သောက်နေတဲ့ ဝီစကီ…။
ဒေါ်မာလာ ကြည့်ရင်းနှင့်ပင် မနာလိုတာလား… မခံချင်စိတ် ဖြစ်လာတာလားမသိ..။ အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်။ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းနဲ့ သားမက်…။ ဒေါသနှင့် ရမ္မက်က လွန်ဆွဲနေလေသည်။ ကြည့်ပဲနေရမလား … လှည့်ထွက်သွားရမလား.. ဝေခွဲမရ။ ဒီထက်ဆိုးလာတာက ကလျာက စားပွဲတွင် ပေါင်ကားပြီး အောင်ခန့်က ဗူးတဗူးထဲမှ တစ်ခုခုကို ထုတ်ကာ.. ကလျာ ဟိုဟာထဲ ထိုးကလိနေတဲ့ မြင်ကွင်း…။
ဒေါ်မာလာတစ်ယောက် သူတို့ကို ကျောပေးပြီး စာပွဲတစ်လုံးတွင် ထိုင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ မိမိ ဖုန်းကို ထုတ်ကာ ကလျာ့ထံ ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်…။
တဖက်မှ ကလျာ့ ထူးသံကို ကြားရသည်။ ကလျာ့ အသံက မောဟိုက်လျှက်..။
“အခု ဘယ်မှာလဲ သူငယ်ချင်း..”
တုန်နေသော အသံကို ထိန်းကာ ပြောလိုက်သည်။
“သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အိမ်မှာကွ… လာမလို့လား သူငယ်ချင်း”
“မလာတော့ပါဘူး ဆိုင်မှာရှိရင် ငါ ဆိုင်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ပြောမလို့….”
စာပွဲခင်း ဖြူဖြူပတ်ပြီး ကလျာ တံခါးလေး ဟကြည့်လိုက်သည်။ ကလျာ့ နောက်က အောင်ခန့်ကလည်း ပေါင်ကြားထဲ လက်လေးအုပ်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ…။
“အဖြစ်ကတော့ ဒါပါပဲ သူငယ်ချင်းရယ်…”
“အော်…ဒါဆို နင်တို့က အရင်ကတည်းက ငယ်ချစ်ဟောင်းတွေ ဆိုပါတော့… မင်းလည်း သိပ် ပိရိတယ် အောင်ခန့်…”
အောင်ခန့် ဘာစကားမှ ဝင်မပြော ငြိမ်ငြိမ်သာ ထိုင်ပြီး ခေါင်းငုံ့ထားသည်။ ဒေါ်မာလာမှ ဆက်ပြီး
“ကောင်းတယ်… ကောင်းတယ်… တစ်ယောက်က လင်ငယ်နေ နောက်တစ်ယောက်က ကြောင်ခံတွင်းပျက်…”
“ငါ့ကို သူငယ်ချင်းလို့ မခေါ်နဲ့… နင့်လိုလူကို သူငယ်ချင်းတော်ရမှာ ရှက်တယ်… အောင်ခန့် မင်းလည်း သူနဲ့လိုက်သွား… ငါ့ဆိုင်ကို မနက်ဖြန် နွားနို့နဲ့ အကုန်ဆေးချပစ်မယ်..”
ဒေါ်မာလာ ပြောရင်း ဒေါသထွက်လာသည်။ ထိုစဉ်…
အောင်ခန့် ဖုန်းမြည်လေသည်။ ဖုန်းနံပါတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်က ခေါ်သော ဖုန်း….။ အောင်ခန့် ဖုန်းကိုင်လိုက်သည်။
“ဘာ… သမီးလေး ပျောက်သွားလို့… ဟုတ်လား…”
အောင်ခန့် မျက်နှာ စိုးရိမ်စိတ်တို့နှင့် ပြည့်နှက်သွားလေသည်။ ဒေါ်မာလာ ဒေါသမှ စိုးရိမ်စိတ်တို့ကြောင့် ရုတ်တရက် မတ်တပ်ရပ်မိသည်…။
“မြေးလေး ပျောက်သွားလို့ ဟုတ်လား…..”
“ဘာ အူကြောင်ကြောင် လုပ်နေတာလဲ ရှာရမှာပေါ့….”
အောင်ခန့်နှင့် ဒေါ်မာလာ အလျင်စလို ထွက်သွားလေသည်။ သမီးဇော ..မြေးဇောတို့က ငယ်ချစ်ဟောင်းတို့ သူငယ်ချင်းတို့၏ သံယောဇဉ်လောက် အရေးမကြီး…။ ကလျာတစ်ယောက် ငေးငေး ငိုင်ငိုင်နှင့် အောင်ခန့်နှင့် မာလာ ကျောကိုသာ ကြည့်ပြီး နေမိပါတော့သည်။
“အိမ်ယာနိုးတော့ ဘွားဘွား.. ဖေဖေ.. ဆိုပြီး အတင်းဂျီကျတယ် ရှာပေးလို့လဲ ပြောတယ်… ကျမ ရေတိုက်ဖို့ သွားခပ်နေတုန်း ပျောက်သွားတာ..”
“ဘယ်မှာ ရှာပြီးပြီလဲ.. ကလေးတစ်ယောက်တောင် နိုင်အောင် မထိန်းနိုင်ဘူးလား ခင်ဗျားတို့က”
အောင်ခန့် ဒေါသတကြီး အိမ်ဖော်များကို ဆူလေသည်။ ဒေါ်မာလာကလည်း..
“ကလေးပျောက်တာ လိုက်မရှာပဲနဲ့ ဖုန်းဆက်ရတယ်လို့…. ငါ့မြေး တစ်ခုခုဖြစ်ရင် နင်တို့ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်တွေးထား…”
“Happy Birthday မီးမီးလေး… Happy Birthday မီးမီးလေးးးးးး….. Happy Birthday to You”
သမီးလေး ပန်းမြတ်နဒီလေးရဲ့ ၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲလေးပင်။ အခုအချိန် အောင်ခန့် ပြုံးနိုင်ပြီ… ဒေါ်မာလာလည်း ပျော်နိုင်ပြီ….။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က သမီးလေး ပျောက်သွားတော့ ရခဲ့တဲ့ သောကနဲ့ သင်ခန်းစာ..။ ပန်းမြတ်နဒီလေးက အိမ်ရှိ ရေကူကန်ဘေးတွင် ငုတ်တုတ်လေး ထိုင်ကာ ဘွားဘွား.. ဖေဖေ နှင့် အော်နေသော အသံ။ ထိုညက အောင်ခန့် နှင့် ဒေါ်မာလာကို တွေ့တွေ့ချင်း အသည်းအသန် ငိုကြွေးသော ပန်းမြတ်နဒီ..။ ဘာပဲပြောပြော… လူသား၂ ဦးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေသော သမီးလေး။ ထိုညက ဒေါ်မာလာနှင့် အောင်ခန့် သမီးလေးကို ခလယ်ထားပြီး အိပ်လိုက်ကြသည်။ အလုပ်ကိစ္စ အချစ်ကိစ္စ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စထက် သမီးလေး ပန်းမြတ်နဒီဘေးတွင် သူတို့ ၂ ဦး အချိန်ကုန်စေခဲ့သည်..။
ကလျာတစ်ယောက်ကတော့ ပြသနာဖြစ်ပြီး နောက်တနေ့ကစပြီး ဖုန်းအဆက်အသွယ် မရတော့။ နောက်ဆုံးကြားရသော သတင်းအရ သူမ၏ မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်သွားသည်ဟုပင်။ သမီးလေး၏ ဘေးတွင် သမီးလေး အိပ်သည့် အထိ စောင့်ပေးရင်း အောင်ခန့် မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။
အောင်ခန့် နိုးလို့ နာရီကြည့်တော့ ည ၁၀ နာရီပဲ ရှိသေးသည်။ ဒေါ်မာလာကို ကြည့်တော့ မရှိ..။ သူ့ အခန်းသူ ပြန်အိပ်နေသည်ဟုပင် အောင်ခန့်တွေးရင်း… အောက်ထပ်သို့ ဆင်းခဲ့တော့သည်။ အောက်ထပ်အရောက်…
“သား..အောင်ခန့် လာ အတူတူ သောက်ရအောင်..”
အာလေးလျှာလေးဖြင့် ဒေါ်မာလာ အတော်ပင် မူးနေလေပြီ။
အောင်ခန့်နှင့် မာလာ စကားမပြောဖြစ်တာ ပြသနာ ဖြစ်ပြီး ကတည်းကပင်..။
“လာပါကွာ အတူသောက်ရအောင်… သူစိမ်းတွေမှ မဟုတ်ပဲ..”
“အမေ သောက်တာ များနေပြီထင်တယ်…”
“များများသောက်မှ အထီးကျန်တာ များများ သက်သာတာကွ”
“အမေ လာ.. သားတွဲပို့ပေးမယ်…”
“မလိုပါဘူး…. မင်းလေးက သူစိမ်းဆန်တဲ့ စကားတွေ သိပ်ပြောပဲ…. ငါ့ဘက်ကို ဘယ်သူမှ မကြည့်ဘူး… ငါ့မှာ… အာကိုးစရာကို မရှိဘူး…”
အောင်ခန့် ဒေါ်မာလာကို တွဲခေါ်ရင်း အခန်းထဲရှိ ကုတင်ပေါ်သို့ တင်လိုက်သည်…။ ကပိုကယို ဖြစ်နေသော အပေါ်အင်္ကျီတို့က ရင်းသားဝင်းဝင်းတို့ကို လှစ်ပြနေသလိုပင်။ အောင်ခန့် စိတ်ရိုင်းများ ဝင်လာသည်။ ညအိပ် ဂါဝန် ပါးပါးကို လှန်ရန် ဂါဝန်အောက်နားကို လက်နှင့် ကိုင်ကာ တဖြည်းဖြည်း မတင်လိုက်သည်။ သွေးကြောစိမ်းများ ယှက်နေသော ခြေသလုံး ဖြူဖြူတို့က ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပြန်သည်။
မဟုတ်သေးပါဘူး.. သူ့သမီးကို ငါယူထားတာ ငါက သူ့သားမက်ပဲ.. တကယ်ဆို အမေပဲပေါ့… ဟု တွေးလာသော်လည်း အကြောပျက်သည့် အရေးအကြောင်းလေးပင် မရှိသော ပေါင်တံသွယ်သွယ်က ဂါဝန်ကို ဆက်လှန်ရန် တွန်းအား တစ်ခုနယ်…။ အောက်ခံဘောင်းဘီ အနီရောင်လေးက ပေါင်ဖွေးဖွေး ၂ ခုကြား နှစ်ဝင်နေပြီ…။ ဇာအနားကွပ်ထားလေသည်။
အောင်ခန့် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့..။ အောက်ခံဘောင်းဘီ အပေါ်မှ ပိပိရှိရာ နေရာကို မှန်းပြီး နမ်းလိုက်လေသည်။ အနံအသက် ခပ်သင်းသင်…. ၎င်းသည်ကား သေးနံ့လဲ မဟုတ်… အများပြောသလို ဒညှင်းသီနံ့လည်း မဟုတ်… ငံပြာရည်နံ့လည်း မဟုတ်…. ပုရိသတို့ လီးတောင်စေသော အနံမျိုးပင်…။
မာလာ တစ်ယောက် လှုပ်လာသည်။ အောင်ခန့်က အခြေအနေ ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်မာလာတစ်ယောက် နိုးနေလေပြီ…။ အောက်ခံဇာဘောင်းဘီ အနီလေးကို အသာဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ လိပ်ပြီး ပါလာသော အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို နမ်းလိုက်ရင်း အောင်ခန့် ဝတ်ထားသော ဘောင်းဘီကို ချွတ်ကာ လီးကို အပြင်ထုတ်ရင်း သုံး လေး ငါး ချက်လောက် ထုလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ဒေါ်မာလာပေါင်ကို အနည်းငယ်ကားရင်း လျှာဖျားလေးနှင့် စောက်စိကို ကစားလိုက်သည်။
အစပိုင်း ချဉ်သလိုလို ရှိသော်လည်း နောက်ပိုင်း ငံပြပြ ဘက်သို့ ဦးတည်လာသည်။ မာလာလက် ၂ ဘက်က အောင်ခန့်ခေါင်းကို ရုတ်တရက် ကိုင်မိသွားလေသည်။ ခါးလည်း ကော့မိသွားလေသည်။ အောင်ခန့် စုပ်နေရာမှ ခေါင်းကို အသာ မော့ကြည့်လိုက်သည်..။
မာလာ့ထံမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြားရလို့ အောင်ခန့် ဆက်စုပ်ရင်း အပေါ်သို့ တဖြည်းဖြည်းတက်ကာ.. အင်္ကျီကို လျော့လိုက်ရင်း ဘော်လီ အနီအောက်က လုံးပြီးတင်းနေသော နို့ကို ပါးစပ်နှင့် အပြည့် ငုံလိုက်သည်။ ပြီးမှ လျှာထိပ်နှင့် နို့သီးခေါင်းလေးကို ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ အောင်ခန့် လူချင်း အသာခွာရင်း ခေါင်းရင်းဘက်သို့ တက်လိုက်သည်။
မာလာတစ်ယောက် ဆေးမိထားသော လူတစ်ယောက်လို ခေါင်းလေး အသာရွှေ့ပြီး အောင်ခန့်လီးကို ပါးစပ်တွင် တေ့လိုက်သည်။ လီး၏ ကွမ်းသီးခေါင်း ပတ်ချာလည်ကို လျှာဖျားနှင့်သပ်ရင်း.. တဖြည်းဖြည်း အပေါ်သို့ တက်လိုက်ပြီး အောင်ခန့် နို့ကို စုပ်လိုက်သည်။ အောင်ခန့် ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တော့ပဲ မာ့လာ့ကို တွန်းလှဲလိုက်လေသည်။ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်သွားသော မာလာ့ကို အောင်ခန့် အပေါ်မှ နေပြီး နို့ကို စုပ်လိုက်သည်။ ကားသွားသော ပေါင်နှင့် ကော့တက်သွားသော ခါးတို့နှင့် တပြိုင်နက် ထိုးထည့်လိုက်သော အောင်ခန့်လီးကြီး..။ တရစ်ချင်း ဝင်သွားသော လီး၏ အရသာ၊ မှုတ်ထားသော ပါးစပ် အရသာတို့ကြောင့် မာလာ တစ်ချီ ပြီးသွားလေသည်။
အောင်ခန့် လီး ဝင်ဝင်ချင်း ခပ်ကြပ်ကြပ် ဖြစ်နေသော မာလာ့ပိပိကို တရစပ် လိုးလေသည်….။ မာလာတစ်ယောက် အောင်ခန့်ဖင်ကို ဆွဲထားပြီး လီးနှင့် ပိပိတို့ အတင်း လိုက်ပူးကပ်လိုက်သည်….။ အနှစ် ၂၀ ကျော် ဝေးကွာနေသော မာလာ့အဖို့ အောင့်ခန့် ဆောင့်ချက်တွေက နောက်တစ်ချီ ပြီးဆုံးသွားစေသည်။ အောင်ခန့်က မာလာ ပြီးသွားမှန်းသိတော့.. တင်းတင်း ပြန်ဖက်ပြီး အနမ်းမိုး ရွာသွန်းလိုက်လေသည်။
မပြီးသေးသော အောင်ခန့်ကို မာလာသိတာကြောင့် အောင်ခန့်ရှိရာကို ကျောပေးရင်း မာလာ ခါးလေးကော့ပေးသည်။ အောင်ခန့် အနောက်မှနေပြီး ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ထိုးသွင်းရာတွင် အပေါက်မတည့်ပဲ စောက်စိကို ထိုးမိလေသည်။ မာလာတစ်ယောက် တွန့်သွားလေသည်။ နောက်တစ်ချက်မှာတော့ တန်းနေအောင် ဝင်သွားလေသည်။ နို့ကို ကိုင်ပြီး အနောက်မှ အားကုန် ဆောင့်လေသည်။ တစ်ချက် တစ်ချက် သားအိမ်ခေါင်းကို ထိမိတာကြောင့် မာလာတစ်ယောက် အောင့်အောင့်သွားသော ဝေဒနာကို ခံစားရလေသည်။
ထိုးချက် ဆောင့်ချက် ဆွဲချက်တို့ ပြင်းထန်လာပြီး မာလာ့ သာအိမ်ထဲသို့ သုတ်ပိုးများ အရှိန်နှင့် ဝင်သွားသည့်အပြင် ပိပိ အပြင်ဘက်သို့ပင်.. စီးကျနေလေတော့သည် မဟုတ်ပါလား..။
နေရောင်ခြည်က ဖြာဆင်းလာလေပြီ။ လေနုအေးအေးကလည်း ပြတင်းပေါက်ဆီမှ တိုးဝင်လာလေပြီ။ ကျေးငှက်တို့၏ သီချင်းသံတို့က အောင်ခန့်ကို နိုးနေသယောင်ယောင်…..။
မာလာ့အိပ်ယာထက်တွင်… ငုတ်တုပ်ထိုင်ရင်း ညက အဖြစ်ကို ရှက်နေမိသည်။ ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ .. ဒေါ်မာလာကရော သူ့အပေါ် ဘယ်လို တုန်ပြန်မလဲ… တွေးကာ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာ အိမ်အောက်သို့ ဆင်းခဲ့လေသည်။
ဒေါ်မာလာ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ ပေါင် မုန် ၂ ချပ်ကို မီးကင်နေလေသည်။ အောင်ခန့်တစ်ယောက် ယောင်တောင်တောင်နှင့် စားပွဲတွင် ထိုင်လိုက်သည်။ မာလာက မီးကင်စက်မှ ထွက်လာသော ပေါင်မုန့် ၁ ချပ်ကို အောင်ခန့်ရှေ့သို့ ချပေးလိုက်သည်။ မျက်နှာကတော့ ခပ်တည်တည်ပင်..။
အောင်ခန့် ကော်ဖီခွက်ကိုင်ပြီး ကော်ဖီ တချိုင့် မော့လိုက်သည်။ ကော်ဖီခွက် ပြန်ချမည် အလုပ်…. ပေါင်မုန့် မီးကင်မွေးမွေးနှင့် ထောပတ်သုတ် ကိုင်ထားသော လက်တစ်ဖက် အောင်ခန့် ပါးစပ်နားရောက်လာသည်။ အောင်ခန့် ကြည့်လိုက်တော့ … မာလာ ………………။
ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျော်ဆုံး အချိန်လေးပါပဲ………။ ကျွန်တော် သိပ်ချစ်ရတဲ့ သမီးလေးရယ်… ကျွန်တော် ရင်ခုန်ရဆုံး လူရယ်… အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေး တစ်ခုလို နေရတာ အရမ်းဝမ်းသာမိတာ အမှန်ပါ….။
ကျွန်တော် လေးနက်စွာ မတွေးပဲ.. ချရေးလိုက်သော ကာရံမရှိသော စာလေး … စာလေးရဲ့ အောက်မှာ ၅ နှစ် သာသာ သမီးလေး ပုံတူ…… ၎င်း… ၎င်းတို့နှင့် အတူ ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ဘဝတိုတိုရယ် …. မဆုံးသော အကြောင်းအရာများဆီသို့… မှတ်တမ်းတင်ထားသော စာအုပ်လေး……။
“မောင်ရေ ..စာအုပ်ချည်းပဲ ကြည့်မနေနဲ့ သမီးလေးလည်း ဂရုစိုက်ဦး”
‌ကျွန်တော့်ကို လှမ်းသတိပေးနေသူကတော့ တချိန်က ကျွန်တော် စွဲလမ်းခဲ့သူ…. တချိန်က ကျွန်တော့် မိန်းမအမေ…. စည်းကမ်းကြီးပြီး စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသူ… ကျွန်တော့်ရဲ့ ယခု ဇနီး … ကျွန်တော့်ရဲ့ မရိုးနိုင် မဟောင်းနိုင်တဲ့ အချစ်………။ မဟောင်းသော အချစ်………။ မဟောင်းသော အချစ်…………။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 11,826
← မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကိုကြီးရယ်